3 guy by Mg Ogga - issuu
မောင်သံချောင်း၊ မောင်လူအေး ၊ မောင်ဥဂ္ဂါ တုိ့ ၏ ကရော်စာ ပေါင်းချုပ်
ပုဵနိုပးမွတးတမ့း ပထမအကြိမး ဿှ၇ သြဂုတးလ
မ်ကးနွာဖုဵ့ Microsoft Word 2010
ကနြျးပူတာစာစီ Microsoft Word 2010 အမ်ို့အစာ့ PDF
ထုတှးေသူ အရကးသမာ့မ်ာ့ ပါတီ(ျမနးမျာပညး) မွ တစးကမ္ဘာလုဵ့သို့ ထုတှးျေဖန့းခ်ိသညး၈
1. သတင့းထောကးသဵခေ်ာင့း နွငးံ အပ်ျိုပနျးဖစးေ
2. သတင့းထောကးသဵခေ်ာငွး့ငးသူေ့ ကြီ့ဦ့တာတေ သတင့းစာရွင့းလင့းပမြွဲတးတမ့း 3.ျပညးသူ့ အျေ့မ 4.
ကျနြးတေားအာ့ ဿှစီစီအောကး အိမးသဵု့မေားတေားယာဥးငယး
တစးစီ့ အလကာ့ပေို့ငး မပေို့ငွးငးပါတးသကျးပီ့မေ့ခနြ့းမျေ့မန့းခန့း 6.
ကးသယြးရေ့၇စာတိုကွးငးကြေ့နနှး့နးကြီ့ာနျပညးထောငးစှုနးကြွီ့ငး သဵခေ်ာင့းအသဵမွ တယးလီဖုနျး့ဖငး
ကးသယြးမျေ့မန့းခ်ကး
1. မောငးလူအေ့နွငးံကငးမရာမ်ာ့ 2. မောငးလူအွေ့ငးံ ကေ်ာင့းသာ့ခေါင့းေ 3. မောငးလူအွေ့ငးံ
4. မောငးလူအေ့တိအလုပးရုဵ 5. မောငးလူအေ့တိုြာ့တင့းကုပး III.
မောငးဥဂ္ဂါ 1. ဟုတးကံေဲပါတယးခငးဗ် 2. ဒါမ်ို့ ဘယးဘုရငး လုပးရဲ သလဲ 3. အလနြး
4.ျမငးသာ့ကြာ့သာ့ 5. ကျနြးတေား
ပေါင့းသင့းအပးသော လူမိုကးမ်ာ့ နွငးံ မပေါင့းသင့းအပးသောလူလိမ္မာမ်ာ့
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး စီစဥးသူ ရနးကုနျးမို့ လယးခေါငး ဘုဵ စီ့ပြာ့ရေ့သမာ့ယောငးယောငး
ိုငးတငြးလူ ၁ ယောကး စုမိကြသညး၈ တစးယောကးက
ဓာတးပုဵတေကြရာ ရိုကးတတျးပီ့ အရကးမသောကးပဲ အျမည့းစာ့တတးသော သူ၇ တစးယောကးက နဖူ့ျေပာငျးေပာငး မ်ကးမွောငးမွေ့မွေ့ အကးတစးဗစးလိုလို သတင့းသမာ့၇ နောကး
ကတောံ ခပးဂေါကးဂေါကး ဘလောံဂါလညျး့ဖစး စပလစးက်ုရယးအရင့းခဵ ဖတြျးဖို့ရေ့သမာ့၈ ထိုသို့ အဵခ်ီ့ဖယြးရာ ဂုဏးအငးမ်ာ့နွငျးံပညးစုဵသော ထို ၁ ယောကး သောကး ရင့းျေပာ၇ျေပာ ရင့း ပေါကး၇ ပေါကး ရင့း ဂေါကးလာသညး၈ ထို လူ ၁ယောကးတငြးဝ ယောကး သော သူမွာ ပေါတောတော
မ်ကးနွာစာအုပးတငြးကလောငးသြေ့ကြ ရင့း သုဵ့ယောကး ပေါငျး့ပီ့
စျာေပာငးတြေ စုထုတးရအောငး လုိ့ ကျနြးတေားက အကြဵျပုမိသညး၈ အာ့လုဵ့က မူ့မူု့ နဲ့ သဘောတျူပီ့ ကောင့းသာ့ပဲ လုပးလေဟျုေပာသော ကြောငးံ ဤစာအုပး လျေ့ဖစးလာသညး၈ အခ်ို့ စာမ်ာ့သညျးပဇာတး
နးသညး၇ အခ်ိှု့တ္တူ
နးသညး အခ်ို့ မွာ အကးေ
ဘှာါဒ ညှာါဒ ဘာဟနး ညာဟနး ကျနြုးပးတို့ မသိ စိတးထဲရွိရာ ရေ့တတးသလုိ့ နဲ့ ရေ့ခ်ငးသလို ရေ့ထျာ့ခငျး့ဖစးသညး၈ ဤစာမ်ာ့သညး ရီရသညး တစးခါ တစးခါ မောရသညး၈ ဘာပျဲဖစျးဖစး ဤစာမ်ာ့ကို
ိုငးမှု ရွိပါက ထိုသူကိုသာ ရညးရယြးပါသညး၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပှး၈သတင့းထောကးသဵခေ်ာင့း နွငးံ အပ်ျိုပနျးဖစးေ
မောငးသဵခေ်ာင့း တစးနေ ကျြုးပးသညးရနးကုနျးမိုအတငြ့းရွိ အပ်ျိုပနျးဖစးေ အ
တငြးတငြးသဵုစဲလြွ်ကးရွိကြောင့း
အခိ်ုထဵမွအခိုးငးအမာသိရွိရသောကြောငး သတင့းထောကး အသဵု့အေ အသဵဖမ့းစကးမ်ာ့ကို ယူကာ အ
့ရညးသဵု့စြဲသညး အခ်ိနးမွဈပီ့ ၁င့းတို
ာငျးဖစးသော ကငးမရွာငး
မာစပြးသိုရောကးသေား မနးနေဂ်ာဖို့ကဲကေ
ထုတျးပနးထာ့ကြောင့းျေပျာပသသညး၈ မနးနေဂ်ာဖို့ကဲ
"သမီ့ကြာ့မရြဵပိတးေ
လိခေုတယး၈
ရဵလခေို တာ၇
လိမိုန့းကလေ့က
့မဟုတးကြောငွး့ငး တစးဗူ့ လ်ွငှး၂ှ သာပေ့ရကြောင့းသိလာရပေသညး၈
ထိုမိန့းကလေ့ကပငးေ ဟုတိုကးတနြိးု့ေ
့ဘယးလောကးစမြ့းသလဲသေသေခ်ာခ်ာသိရအောငးကသြဲာ့ ပါအုန့းလာ့
ဂေ လီမလုပးနဲ ဟူသော
ဵု့မ သြှါဒတရာ့ကို ၁၂မိနစးခနးကြာအောငး ဟေျာေပျာပနးရာ ကျြုးပးမွာ
ဂေ လီလည့းမဟုတးကြောင့း၇ ဂေ လီလည့းမရွိကြောင့း သာမာနးသတင့းထောကးသျာဖစးကြောင့းျေပာကြာထကြးခြာခဲရပေသညး၈ ကျြုးပးလည့းအ
"ဘာအလိုရွိသလဲ "အပ်ျိုပနျးဖစးေ "
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး "မဟုတးဘူ့" "ဒါ
ို ယောကးဖကောင့းကောင့း ရစေ ရ
မယး" "ညီမအတကြးလည့းမဟုတးပါဘူ့" "ဒါ
ငါ့ရကးလောကှးမ့းခ်ုပးသြာ့ မယး...အဲဒီက် အတနးကြာစကာ့ျေပျာပီ့နောကး
ထိုသျဖငိးု ကျြုးပးသညး ထကးထကးမို့ဦ့ လကးတစး ရိုကးကငြ့း
သိရောကုးရွိခဲရလေသညး၈
ထိမ့း မ်ကွးာသစးေ
စိတးမထငးရမထငး သလိုဖကးလဵု့တတးရာ ကျြုးပးလည့းဖကးအလဵု့မခဵရအောငး သတိကြီ့စြာထျာ့ပီ့ မျေ့မန့းရာ ထိုေ
သဵု့နေကျြပျီဖစးကြောင့း တို့တို့တိတးတိတး ကြိတျးေပာ လိုကးပါ သေ့သညး၈ ကျြုးပးလည့း အကြီ့အကဲကတေားအာ့
အက်ယးအက်ယးမျဖစးခ်ငးလို ဒီေိုငးငဵတေားထိပးတန့းလွှိုကးခ်ကး
့သဵု့ကာမွ မေ့ရမလာ့ဟု စိတး ပေါကးကြာ့ရနးကြို့စာ့မွု
ိျု့ပီ့သကာလ ကျြုးပးလည့း
ျဖငးရိပးသာတငြဿးပါတးခနး
လိုကးရပေသညး၈ ရိပးသာမွထကြးလ်ွငးထကြျးခင့း ထိုေ
ို့ကြို့မ်ာ့ကို သိရရနး သာမနး
တစးယောကး မျေ့မန့းရနးမကြီု့စာ့ဘဲ ပိုမိုထျူ့ခာ့သြာ့စေရနး ဗမာေ
တိတိုင့းရင့းေ
ဟျုေပာရာ ကျြုးပးလည့းသိခ်ငးဇျောဖငးေ ကြညျးပီ့
့ဘူ့ကို ကမန့းကတမ့း လ်ွငျးမနးစြာဖငြျးပီ့ လွ်ျာဖငးတို
ယခုထိထမင့းမစာွို့ငးဘဲ က်ူတဵပိုကးကလေ့
သငြ့းကာ အခ်ိုရညးမ်ာ့သာတငြးတငြးသောကးနေရပါကြောင့းသတင့းကောင့းပါ့လိုကးပါတယး၈ ၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ဿ၈ သတင့းထောကးသဵခေ်ာငွး့ငးသူေ့ ကြီ့ဦ့တာတေ သတင့းစာရွင့းလင့းပမြွဲတးတမ့း မောငးသဵခေ်ာင့း တစးနေတစး၉
တောငးတကး စနြစာ့ခနး့း သတင့းစာရွင့းလင့းပြဲသို တကးရောကးရနး ဖိတးကြာ့လာတစးေ ရောကးရွိလာပေသညး၈ ရေခဲတောငး
ျပနးလညးလတြျးေမာကးလာသျူဖစးသညး၈ သတင့းစာရွင့းလင့းပြဲ ညနေသို ရောကးသေား သူ မိတးေ အရာရွိကြီ့မ်ာ့၇
မြ်ို့မ်ာ့၇ှနးထမ့းမ်ာ့၇ အစို့ရ
ှတးကောင့းစာ့ကောင့းမ်ာ့ကှိုတးစာ့လာကျာဖိျု့ဖိျု့ဖတျးဖတးရွိကြသညွးငး တစးကျြပညးတငြ့း ဂ်ာနယးပေါင့းစဵုမွ သတင့း ထောကးမ်ာ့၇
ိုငးငဵျခာ့သတင့းထောကးမ်ာ့ သညးလညျး့ပာ့ပန့းခတးမွ်
လှုပးရွာ့လ်ွကး ရွိတာ ကိုတေရြသညး၈ ပထမဦ့စြာ အခမ့းအနာ့မစမွီ လာသမ်ွလူအာ့လဵု့အာ့ ရွနးပိနွးငး တူသောအခ်ိုရညးတစးမ်ို့ကိ ဘမွး့ငလိုးကးခ်ပေ့လေသညး၈
ိုငးငဵျခာ့သတင့းတစးဦ့မွ ရွနးပိနးဟျုေပာသျဖငး သောကးဘူ့အောငး ယူသောကးလိုကးရပေသညး၈ အာ့လဵု့လည့းခကြးကိုယးစွီငး စကာ့ျေပာလ်ွကးရွိရာ၇ ရွေပိုင့း
ီမွ လကးခုပးသဵ တစျးေဖာင့းျေဖာင့း
ကြာ့ရျပီ့ သကာလ သူေ့ ကြီ့ဦ့တာတေ ကြရြောကးလာပေသညး၈ အခမ့းအနာ့မှု့မွ
ကိုယးသြာ့ ကြ လေသညး၈ သတင့းစာရွင့းလင့းပစြဲတငးလ်ွငးစတငျးခင့း သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ ဦ့တာတေ ခငးဗ်ာ့ဘာလို တောတေတြောငးတေတြကးတာလည့း
ျေပျာပ ပေ့ပါ ဦ့တာတေ၈၈ တစးတစးတူ့တြေ၇တီတြေ၇တောကးတဲတြေ၇တေခ်ြငးလိုပါ၈ သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ ဟုတးကဲ တေခြဲပါသလာ့ခငးဗ်ာ့
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ဦ့တာတေ၈၈ တောကးတတေဲာမတေတြောဘူ့၈တရုတျးပညးသြာ့ ကြလေရဲ သတင့းထောကးတစးဦ့ ၈၈ ဘာလိျုေခလ်ွငးမတကးဘဲ ရဟတးယာဥးနဲတကးရပါသလဲခငးဗ်ာ့ သူေ့ ကြီ့ဦ့တာတေမွဘာမွမျေဖကြာ့မွီ သူ
ကိုယးရေ့အရာရွိမွ အလ်ွငးအျမနှးငးရောကး
ျေဖကြာ့သညး၈ ကိုယးရေ့အရာရွိ၈၈ ၄ဟတးယာဥးလို မခေ ပါနဲရိုင့ျးပပါတယျးခာ့လျိေပာငုး့လဲသဵွု့ဵု့ပေ့ပါ၈ သတင့းထောကး၈၈ ဟုတးကဲ ဘာလျိုခာ့နဲတကးတာပါလဲ ဦ့တာတေ၈၈ ကျနြးတေားကျခာ့စီ့ရတာကြိုကးလိုပါ သတင့းထောကးတစးဦ့၈ အဲဒျီခာ့နဲ ဘယးတောငးကို တကးတာပါလဲခငးဗ်ာ့ ကိုယးရေ့အရာရွိ၈၈ ဖငးလနးရာဇီပါ သတင့းထောကးမ်ာ့
သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ ကျနြးတေားတိုသိထာ့တာ ဂနးလနးရာဇီပါခငးဗ်ာ့ ဘာလို… ကိုယးရေ့အရာရွိ၈၈ ကျနြးတေားတို ဖငးလနျးပျီ့ပနးခဲရလိ၇ု ဖငးလနးရာဇီ
သတးမွတးပေ့ထာ့ပါတယး၈ သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ ဟိုရောကးတောဘယးလိုမ်ျာ့ဖစးပါသလဲ ဦ့တာတေမွ မေ့ငျေါပရာ လေယာဥးမှု့၈၈ ကျနြးတေားတျိုခာ့ဟှာယးသာမကောင့းလို ခဏ
င့းရာမွာ တငြးကျြဵသြာ့ တာပါ၈
သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ျခာ့တငြ့း ကျြဵသြာ့ တာပေါ လေယာဥးမှု့၈၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ကိုယးရေ့အရာရွ၈ိ ၈
ကျနြးတေားကခ်ကးခ်င့းဘဲ ပါလာတျဲဂိုဟးတုဖုန့းနဲ
တောင့းခဵပါတယိးုငးငဵျခာ့သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ ဒီိုငးငဵမွာ အရပးသျာ့ဂိုဟးတုဖုန့းကိုငးလိုမရဘူ့ မဟုတးလာ့ဗ် ၈ဘယးလိုလို ခငးဗ်ာ့တိမွုာ ပါလာတာပါလဲ ဦ့တာတေ၈၈ အကြီ့အကဲက မြေ့နေလကးေ
သတင့းထောကးမ်ာ့(သဵျပိုငး ၈၈ သြေား… သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ အကူအညီဘယးလိုရခဲပါသလဲ ကိုယးရေ့အရာရွိ၈ ၈ သူတို
ီမွာ ကျနြးတေားတိုလို တောငးတကျးခာ့မရွိတဲအတကြး တောငးတကးအဖြဲတစးဖြဲ လတးလိုကး
ပါတယး၈ျဖစးခ်ငးတော သူတိုလတးလိုကးတတောငဲးတကးအဖြဲဟာ တောငးမွာ့တကးသြာ့ ပါတယး၈ သတင့းထောကးကြီ့တစးဦ့၈၈ လေ့စာ့ဖိုကောင့းလွပါတယး ကိုယးရေ့အရာရွိ၈၈ ဟုတးကပါ၈ဲ
နာ့လညးမှုမွျာ့ပီ့ တောငးမွာ့တကးသြာ့ျပနးပါတယး၈ သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ ဘာလိုတောငးမွာ့တကးကြပါသလဲ၈ ကိုယးရေ့အရာရွိ၈၈ သူတကို တောငးဘကးကို ဘဲသိလိုပါ၈ ဒါနဲဘဲမျဖစးတောဘျူ့ခာ့နဲကယး
(ကငးမရာသဵမ်ာ့ သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ အဲဒီလိုလာမကယးခငးမွာဘယးလိုအခကးအခဲတေမြ်ျာ့ဖတးသန့းခဲရပါသ လဲ ဦ့တာတေ၈၈ အဓိကကတော
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ အအေ့ဒဏးကိုဘယးလျိုဖတးကေ်ားခဲရပါသလဲ ဦ့တာတေ၈၈ ဒါကတော
ကိုယးရေ့အရာရွိဟျာခာ့ထဲမွာ ကောငးမလေ့တေနြဲ ဖကးနေကြပါတယး
ညးသညးမ်ာ့ထဵမွလကးခုပးသဵတျေဖာင့းျေဖာင့းထကြးပေ လ်ွကးရွိသညးအျပငး ဟူသော အာ့ပေ့သဵမ်ာ့ပါကြာ့ရ၈ သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ တစျးခာ့ဘာအခကးအခဲမ်ျာ့ဖတးကေ်ားခဲရပါသလဲ
ကိုယးရေ့အရာရွိ၈၈ သောကးရေအခကးအခဲပါ၈ ကျနြးတေားတိုမွာပါလာတဲရေက အလနြးနည့းပါတယး၈ ရေမရွိရငွးင့းတောထဲမွာ
ကျနြးတေားတရေကို နးတော ရေကိုရီ
သတင့းထောကးတစးဦ့၈၈ ဘယးလယိုပါသလဲ ဦ့တာတွေငးအတူပါသြာ့သူကောငးမလေ့တစးဦ့(ရွကျးပဵု့လျေ့ဖငး ၈၈ ဟုတးကဲရွငး သမီ့ကို ဦ့တေက
ခဵသောကးကြပါတယး၈ ကယး ရီ
ိုငးကယးအခါ ဿှကေ်ားလောကး ထုတးပေ့ရပါတယး၈ နောကးကြာတော သမီ့သိပး မထုတိးုငး
တောဘူ့၈ တစးစကး လောကးက်တာ တောငးမွဦ့တာတေက လျာပီ့ ပါ့စပးဟခဵသောကးပါတယး ညးသညွးငးသတင့းထောကးမ်ာ့
သူေ့ ကြီ့ ဟာ အဲဒီအခ်ိနးမွာ အလနြးကောင့းတဲ စီ့ပြာ့ရေ့စိတးကူ့တစးခုကို ရရွိခဲပါတယး၈ သတင့းထောကးသဵခေ်ာင့း၈၈ ဘယးလိုစိတးကူ့ပါလဲခငးဗ်ာ့ ဦ့တာတေ၈၈ အလနြးမကြိုကးပါဘူ့၈
တစးမ်ို့ထုတးဖစို တးကူ့ပါ၈ နောကး
ဒီလောကးမကောင့းပါဘူ့ ဒါနဲကျနြးတေားကြိုကးသလို သူမ်ာ့တေလြည့းကြိုကးမွာဘဲ အကြဵရပါတယး၈ ဒါကြောငး အခု
အဲဒီစကးရဵုမွာမိန့းကလေ့တျြေခည့းဘဲခနးတာပါ၈ျပညးတငြ့းမွာရွိတဲ အမ်ို့သမီ့တေလြည့းအလုပးရ ၇
န့းရွင့းကိုလည့းအဵတုရာရောကး၇ိးုငးငဵျခှာ့ငးငြေ လည့းရအောငးကြဵေ
ဟျုေဖကြာ့ရာ ကျြုးပးလည့း သိခ်ငးဇျောဖငး ကောင့းပါမလာ့ဟုထျပီ့ မျေ့မန့းရာ ဦ့တာတေ အျေဖကြောငး တစးခန့းလဵု့ အောသဵ အနးသဵမ်ျာ့ဖငးပကြးလောရိုကးသြာ့ပါတောသညး၈ ဦ့တာတျေပနျးေဖလိုကးတာကတော အခမ့းအနာ့မစတငးမွီလူကြီ့မင့းတိုကို ညးခဵတာ အဲဒီအခ်ိုရညးပါဘဲ ဟူသတညး
၀၈ျပညးသူ့ အျေ့မ မောငးသဵခေ်ာင့း အဲဒီနေ မတးလှဝရကးနေ ကြိုတငးစီစဥးထာ့သညး လူတေရြစိဲတးထဲမွာ
ရဲရေဲတာကျးပညးသူတြေ၈
တေကြလည့း တစးလငြးလငြးနဲ လူထောငးပေါင့းမ်ာ့စြာ စုမိနေကျြပီ၈ ကြေ့ကေ်ား နေကြတာက စစးအစို့ရျပုတးက်ရေ့တဲ၈ ရွေ
ွဖူ့စဥ့းအနီစည့းထာ့တဲ ရဲရေဲတာကးတေားလွနးရေ့ရဲဘေားတေကြ တိစု၇ သာ့ဇာနညး၇
ညနေလောကးရောကးတော စစးကာ့တေရြောကးလာသညး၈စစးသာ့တြေ ကသညး၈သေနတးတေမြောင့းတငးထာ့ကြသညး၈သူတိုဗိုလးကြီ့က အ
ကးမျပတး သတင့းပို နေသညး၈ လူအုပးဘကးကိုကြညးနေကြသညး၈
ပထမတော လူထု လွုပးလွုပးရွာ့ရွျာ့ဖစးသြာ သေ့သညး၈ နောကးးစစးကာ့လာကာစလောကးကလို သိပးမကြောကးတော၈
စစးအစို့ရျပုတးက်ရေ့ တိအရေု့နောကးပိုင့း
လာကြသညး၈ ဘယး ညာ ဘယး ညာ နဲ၈ လူအုပးကလည့းရွေတို့လာသညး၈ ခဏကြာ လူထုရွေက ကာ့တစးစင့းပေ ကို ရဲဘေားသဵခေ်ာင့း တကးလာသညး၈ လကးထမွဲာ လေားကိုငးထာ့လိ၈ု
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ကြီ… ဟယးလို..တကးစတီ 123………… ရျပီ..ကြီ…………… ကြီ…ကီ.ြ .ဟယးလို ဟေစကး
ခငးဗ်ာ့စကးသိမ့းသြာ့ရငး က်ုပးလွေ်ားပေ့မယးဗ်ာ ကောင့းအောငးသာလုပးပေ့ နောကး
သူတိုညွိနေကြသညး၈ ခဏကြာ ဟိုလွညးဒီလွညးလုပျးပီ့ စကး
ဟယးလို..ရျပီ၈ ရဲဘေားစစးသာ့တို၈ တျိပညုးသူတြေ ရဲဘေားတို
ငါတိကို
ျပနေတာ ရဲဘေားတကိုမဟုတးဘူ့၈
င့းရဲစုတျးပတးနေကြတာ ငါတိသိုတယး၈ ကောင့းစာ့နေကြတာက
အာဏာရွငးတေနြဲ သူတိုမိသာ့စုတြေ၈ သူတိုတေက်ြတောစိနးကျိုပညးတောင့းလိုကှးယိးုငးတယး၈ ရဲဘေားတငါတို က်တောုထမင့းကိုနပးမွနးအောငး မနည့းကြို့စာ့ ရတယး၈ ရဲဘေားတကမွို တပးထဲမွာ ပဲဟင့းစာ့ရသေ့တယး၈
ငါတျိပညုးသူတေမြွတော
တောငးအိုငိးုငျးဖစးနျေပီ၈
ငါတျိပညုးသူတေကြ ရဲဘေားတိုကိုမမုန့းဘူ့ တပးမတေားကိုမမုန့းဘူ့၈ ရဲဘေားတဟျိာုပညးသူတြေ ထဲကလာခဲကြတာ ၈
ိုငးငဵကိုခ်စးလို အသကးထကးခ်စးလို တပးထဲကှိုငးလာကြတျာဖစးတယး၈
ရဲဘေားတို တှာနးကျပညးသူကိုကာကယြးဖို တိုငျး့ပညးကို ကာကယြးဖျိုဖစးတယး၈ ဘာမဟုတးတဲ ငါတိရဲုဘေားတကို
မ်ကးစိမွိတးပစးရမွာလာ့၈ရဲဘေားတျိုပညးသကိူုကာကယြးပေ့ကြပါ၈ျပညးသူနဲပူ့ပေါင့းကြပါ လိငါုညီ ရဲဘေားတကိုမွာခ်ငးတယး လူထုသဵမွာလကးခုပးသဵတစျးေဖာင့းျေဖာင့းထကြးပေ လာ၈ျပညးသူခ်စးတစစဲးသာ့တြေ
လကးနကးကိုငးကာတိဘကုးပါ (အာဏာရွငးကျိုဖုတးခ်ကြစို (ျပညးသစစူးသာ့ တိုစစးသျာ့ပညးသူစစးသာ့ တိုစစးသာ့ျေဖာင့းျေဖာင့းျေဖာင့းျေဖာင့း လိုအေားနေကြ၈ တန့းစီနေတသောတပးမတေားသာ့မ်ာ့မ်ကွးာနီရဲလ်ွကးရွိ၈ဗိုလးကြီ့တေနြေသညး၈စစးသာ့တစးခ်ိုမ် ကးရညှးဲနေသညး၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး (တပးမတေားသာ့တေသြညျးပညးသူဘကးကအျမဲရပးတညးကာကယြးရနးလာနျေပီ… တပးမတေားသာ့တေသြညျးပညးသဘကူးကအျမဲရပးတညး အခိုငးမာ မေ်ားလငးကြီ့စြွာငျးပညးသူလူထု ရဲဘေားသဵခေ်ာင့း
ညောငးဦ့က ..သာ့ကိုက်ာ့..ကိုက်ာ့ရွိလာ့..ကိုက်ာ့.. အမေပါ..ရွိရငးသာ့ကိုအမေမွာမယး
ျပညးသကိူုတောံ
အမေအိုကာ့ပေ မွာ ရပးစောငးနေ၈ အဲဒီထဲမွာ
ဒူ့ထောကးထိုငးက်သြာ့၈ ရဲဘေားငိုနျေပီ၈ ရဲဘေားကြာ့မွာ တှာနးနျဲပညးသူ၈ ရဲဘေားဘယးဟာကိုရြေ့မလဲရဲဘေားစစးသာ့၈ တောကး" ခဏကြာဗိုလးကြီ့တောကးခေါကျးပီ့ စကာ့ျေပာစကးကိုလငျးပစး၈ ဗိုလးကြီ့နဲ အတူစစးသာမ်ျာ့ပညးသူဘကးသျိုဖညျး့ဖည့းခ်င့းလွေ်ာကးလာ၈ျပညးသစစူးသာ့ တိုစစးသာ့၈
ျပညးသူစစးသာ့ တိုစစးသာ့၈ ဟျုပညးသူတြေ
မေ်ားလငးတကြီ့ ကြညးနေကြ၈ စစးသာ့တြေ သေနတးကိုအောကးစိုကျးပီ့ျေခလွမ့းသကြးလာ ၈ျပညးသူတြေ လကးယပးခေ နေကြ ၈ကတဲသူကနေကျြပီ၈ စကွာ့ငျးေပာစရာမလိုတော၈ စစးသာ့တြေ သေနတးထမျး့ပီ့ ခိုငးမာခ်ကးကိုယးစွီငျးပညးသူဘကျးေပ့လာ၈ျပညးသူတြေ တစးယောကးနဲတစးယောကး ဖကးခုနးနေကြ၈ ငိုတဲသူတေကြှမ့းသာလနြ့းလို ငိုနေကြ၈ သူတိုပါရငး ဒီတစးခေါကးတောတို သေခ်ာပေါကး အောငျးပီ ဟျူပီ့ အပေ်ားကြီ့ပေ်ားနေကျြပီ၈ျပညးသနာ့မရောကူးခငးလကးတစးကမ့းအရောကျးပညးသူကြာ့ထဲမွျေပ့လာနေသော စစးသာ့တြေ
အုတးခပဲိုင့းတစးပိုင့း
ီ အရွိနးနဲထကြးလာ၈ စစးသာ့တစးဦ့လဲက်သြာ့၈ ရဲဘေားခေါင့းမွာ
သြေ့တေနြဲ၈ စစးသာ့တေကြောငးသြာ့ ၈
လျူေပျ့ပျီပညးသူနစစဲးတပးကိုျေပ့ရင့းဖငးတောငးလွနျးပသြာ့သေ့သညး၈ အဲဒါအောငးဒငး သန့းရေဒလဵ ဟူသောအသဵတစးသဵထကြးပေ လာ၈အေားတဲလူကိုဥ၈ျပညးသူမ်ကးလဵု့ စစးသာ့တြေ တော အဵကြိတးထာ့သောဗိုလးကြီ့
ီမွ အမိနးပေ့သဵထကြးပေ လာ၈
ပစး… ထိနောကုးဖောင့း ဖောင့း ဒလောင့း ဒလောင့း သြေ့တျြေမငးရသညး၈
ကးထောငးထာ့သညး၈ ရဲဘေားသာ့ဇာနညး၈ အူက်ျပီ့လဲနေသညး၈ ရဲဘေားအျေ့မ သာ့ဇာနညးကိုျေပ့ပေထြာ့သညး၈ ရဲဘေားသဵခေ်ာင့းထိထာ့သညး၈ သူဖငးမွာအပေါကးကြီ့နဲ၈ အျေ့မနာ့
မ်ကးရညးတေနြဲ ဗိုလးကြီ့ကိုမောကြညးသညး၈မ်ကးစခ်ီလိုကးသေ့သညး၈ ဒီမွာဗိုလးကြီ့…အျပစးမဲတျဲပညးသူတေကြိုမသတးပါနဲ အျေ့မကိုသတးပါ၈အျေ့မကိုဖမ့းပါ၈ဗိုလးကြီ့ တိလုပးခ်ငးတာလုပးပါ အေ့ခဲနေသောဗိုလးကြီ့ရဲမ်ကးလဵု့မွာ အရိပးတစးချုဖတးသန့းသြာ့သညး၈ အျေ့မျေပျာပျီ့ပီ့ခ်င့း ပစးခတးသဵမ်ာ့ရပးသြာ့ သညး၈
ျပညးသူတေလြတြးရာ
ဗိုလးကြီ့တို အျေ့မကိုကြညျးပီ့ တို့တို့တိုငးပငးနေကြသညး၈ ဗိုလးကြီ့ခေါငျး့ငိမးနေသညး၈ တစးဦ့
ွတးခမ့းမေ့သပးစဥ့းစာ့နေကြသညး၈ သိပးမကြာလိုကး အျေ့မစစးကာ့ ပေ ပါသြာ့သညး၈
သြာ့ကြသညး၈ လဲနေရာမွ မ်ကးလဵု့ခ်င့း
ဵုသညး၈အျေ့မ မ်ကှးန့းထမွဲာ မ်ကးရညးစတေနြဲတဲ၈
စစးကျာ့ပနးသြာ့ျပီ့ ပုန့းနေသောလူတြေ အလွ်ိုလွ်ျိုပနးထကြးလာသညး၈ ဒဏးရာရနေသော လူတြေ က်
အနစးအနာခဵသြာ့ ရွာတာလို ရွိုကျးပီ့ျေပာသညး၈ျပညးသူတြေ အျေ့မ အကြောင့းျေပာနေကျြပီ၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပျးပညးသအျေ့မျူပညးသူအျေ့မ လိုလည့းအေားဟစးနေကျြပီ၈ အာ့လဵု့အတကြးအနစးနာခဵသြာ့ ရွာတဲ သတးမွတးလိုကးကြသညး၈
ကြာ့ရသညး၈ တပးထမွဲာထမင့းခ်ကးနေရသလိုလို၈ဗိုလးကြီ့နဲရသြာ့သလိျုေပာနေကြသညး၈ ဒီလိုနွဲစးတေကြာသြာ့သညး၈ စနြးလတးစနြးစာ့သြာ့တဲ တေားလွနးရေ့ရဲဘေား အျေ့မ ကိုမမေိုငးပါ၈ တေားလွနးရေ့ကို လည့းမမေိုငးပါ၈ တစးရကး
ူ့လေနာ့မွာ လမ့းကူ့တော အျေ့မ ကို ကာ့အကောင့းစာ့ကြီ့ပေ တငြး တေလြိုကးရ
သညး၈ အျေ့မ မွတးမိသညး၈ မ်ကွးာကြောတင့းတင့းနဲ မသိခ်ငးယောငးေ နောကးမွသိရတာ အျေ့မက လကးနကးတြေ တိုကးချတြးေ အျေ့မကို
့ကြောပေ့ရတယး တဲ၈ နောကးတောသူကို ခေ သြာ့တဲ ဗိုလးကြီ့က
အကြောင့း ကို ဂဃနဏသိရသညး၈ သြေား ရဲဘေား
ဗိုလခ်းုပးကတေားအျေ့မ
တောပါရာ့… ၈ ၈ ဿှ ၇မတးလှဝရကး ပန့းပေါင့းစဵုတေားလွနးရေ့နေ
အရငး အစို့ရအကြီ့အကဲအ အထူ့ကြီ့ထြာ့လာရာ စီစဥးေ
တိုငျး့ပညးတငြးကို့သိန့း
င့းရဲမြေဲတမှု
ကး လုပးသြာ့သျဖငး တိုငျး့ပညးတငြး
ပျးပီ့ မပေါကးရငးတော မ်ကွးာထာ့တင့းတင့း နေကြပါတယး၈ ကြာတော အဲဒီ
အရငျး့ပုတးသြာ့ ပါတယး၈ လူကြီ့မင့းတိအဲုဒီလိုလိုကှးေပေ့ရငး င့းရဲမြေဲတနေကြတဲ အလုပးမလုပးကြတာဟာ
ဵအလယြးရတာကနေ အလုပးရွိလည့း မလုပးခ်ငးကြတောပါဘူ့၈
င့းရဲမြဲတေအောငးလုပးတဲ အဓိကအခ်ကျးဖစးပါတယး၈ ဿလဵု့ထီကို တိုကးဖ်ကးရွာစးပေါင့းမ်ာ့စြာ
အျမစးတယြးနေသောကြောငး
အရေ့ယူရအောငး ရဲကအစ တရာ့လူကြီ့အ
ဵု့ဿလဵု့ ထို့နေကြ ဒိုငးကိုငးနေကြတျာဖစးပါတယး၈
ဘုန့းကြီ့တေပြငးပါ၈ ဿလဵု့ထီတကြးခ်ကးရေ့ ကေားမတီကို ဖြဲစည့းလိုကးပါ၈ သေခ်ာပေါကးအပိုငးဂဏန့းကို သတင့းစာ၈ရုပျးမငးသဵကြာ့ကနေ ထုတျးပနးကျြေငာပေ့ပါ၈ ဒါ
ျိုပညးသူတေလြည့းဿလဵု့ထီပေါကျးပီ့ ခ်မ့းသာလာပါမယး၈ ဿလဵု့ထီဒိုငးတြေ အရငျး့ပုတျးပီ့
ပိတးကုနးပါလိမမယးး၈ အဲဒီအခါကြရငး ဘောလဵု့လွညးထို့ကြမျွာဖစးပါတယး၈ ဘောလဵု့ေ
ာငးရကြးလ်ွငး ဘောလဵု့ဒိုငးတေလြည့း ပိတးကုနးမျွာဖစးပါတယး၈ လို့ အ
ိုတငးသငြ့းပါရစေ
အိမးသဵု့မေားတေားယာဥးငယး တစးစီ့ အလကာ့ပေို့ငး မပေို့ငွးငးပါတးသကျးပီ့မေ့ခနြ့းမျေ့မန့းခန့း မောငးသဵခေ်ာင့း နျေပညးတေား၈မတးလ ဿဿ၈ ယနေက်င့းပသော မဲ
နယးအမွတး(၁ မွ အမ်ို့သာ့လတးတေားကိုယးစာ့လွယး ဒေါကးတာသဵခေ်ာင့းကိုငးငဵတေား
အျေခခဵမှု(၃ ခ်ကးကို အျေချပျုပီ့ ဖြဲစည့းပဵုအျေခခဵဥပဒေအခန့း (ှ ပုဒးမ ၀၃ ပုဒးမခြ(ဲ ဂ အရ လတးတေားအမတးတို
မေားတေားယဥးငယးမ်ာ့ သကး ပိုေ
ငးအတနျး့မွငးတငးရေ့အတကြး ဿှစီစီအောကး အိမးသဵု့ မျေ့မန့းလိုပါကြောင့း၇
အလကာ့ရယိူုင့းခငြွးငး
တငြး မေားတေားယာဥးငယးအသစးမ်ာ့ ပိုမိုသဵု့စြဲလာမညး
အ္တရာယးလွေ်ာနညျး့ခင့း၈ မေားတေားယာဥးကြဵဵခိုငးမှု တို့တကးလျာခင့း၇ ယာဥးကြော ပိတး ကင့းရွငျး့ခင့း ၇ဇိမးက်ျခင့း
ိုလျိုခငျး့ဖစးပါကြောင့း သိရွိလို
တစးဖကးတငြးလညျး့ပညးတငြ့း စကးမှုဇဵုမ်ာ့က မေားတေားယာဥးမ်ာ့ ထုတးလုပးနေသေားလည့း အ
ကျနြးတေားတလို
က်ပးသိန့း(၀ှ သိနှးန့းက်ငး
ခကးခေဲနသညး
အနေအထျာ့ဖစးပါကြောင့း၇ မှယိးုငးပါကြောင့း ၈လကးရွိသဵု့စြဲနေရသညး ယာဥးအိုယာဥးဟောင့း အမ်ာ့စုမွှာ၆၆ှမေားဒယးမွာ အျမငး ယာဥးအိုယာဥးဟောင့းမ်ာ့
ွစး(ဿှ ကေ်ားသဵု့စြေဲနရသညး
ကျနြးတေားတလိုအမတးမ်ာ့မစီ့လိုပါကြောင့း၈ ယခုကသိဲု ကြဵ့ခိုငးမှုက် သဵု့စြဲနေရသညးအတကြး
င့းနေသညး ယာဥးမ်ာ့ကို ပိုမိုကုနးက်ျခင့း၇
မ်ာ့ကြဵုတေနြေရသညးကို လေလာတေရြွိရပါကြောင့း၇ အိမးနျီ့ခင့းတရုတိးုငးငဵမွာ မေားတေားယာဥးငယးမ်ာ့၇ စေ့်သကးသကးသာသျာဖငး
အီယိုငးငဵမွာ
ထိုကြောငး အ္တရာယး
အိမးသဵု့မေားတေားယာဥးငယး မ်ာ့ကို ဗိုလးခ်ုပးတေနြဲ သူတိုအမ်ို့တေတြော တငးသငြ့းခငြျးပုခဲသညးကို လေလာတေရြွိရပါကြောင့း
ီစှာု့န့း သကးသာသော
ျပ န့းထျာ့ခင့း အ
ိုပါညနြးကြာ့ခ်ကးမ်ာ့ကို ပယးဖ်ကးပေို့ငျးခင့းရွိမရွိ၇ လကးရွိ မေားတေားယာဥး အစုတးတြေ
ို မိမိ မေားဒယးနိမး မေားတေားယာဥးမ်ာ့အာ့ အစို့ရလေလဵအဖြဲသို
မေားတေားယာဥးအသစးတစးစီတင့းသငြှး့ယးယိူုငျးခင့းရွိမရွိ၇
မေားတေားယာဥးအစုတးမ်ာ့အာ့ အစို့ရမ်ွာ့ငးမေားတေားယာဥးလိုအပးလ်ွကးရွိသော နယျးမိုမ်ာ့သျိုဖနျးဖူ့လေလဵတငးေ သူတို
အလကာ့ပေို့ငျးခင့းရွိမရွိ ၇တစျးခာ့အမတးတေမြပေ့ရငးနေပါ ကျနြးတေားကို ပေ့ဖို အစီအစဥးရွိမရွိ၈ အစို့ရအဖြွဲငးစပးလ်ဥ့း၊သိရွိလိုပါကြောငျး့ဖငးမျေ့မနးသညး၈၈
ထိနောကုးသကး
ိုငးရှာနးကြီ့မွ ဟိုဟိုဒီဒျီေပာကြျာ့ပီ့ သကာလ
နောကးသဵု့လကြာသညးအခါ အ မဲ
နယးအမွတး(၁)မွ အမ်ို့သာ့ လတးတေားကိုယးစာ့လွယး
ဒေါကးတာသဵခေ်ာင့းအာ့ တရုတိးုငးငဵလုပး ခ်ယးရှီကးဂနြးတစးစီ့ပေ့အပးရာ တစျးခာအမတးတေလြည့း၈ အိမးတောင့းဖိုအ နောကးမိန့းမရွာပေ့ဖိုအ
ကးသယြးရေ့၇စာတိုကွးငးကြေ့နနှး့နးကြီ့ာနျပညးထောငးစှုနးကြွီ့ငး သဵခေ်ာင့းအသဵမွ တယးလီဖုနျး့ဖငး
သဵခေ်ာင့းအသဵ၈၈ ဟယးလှိုနးကြီ့ခငးဗ်ာ့ ကြာ့ရလာ့မသိဘူ့ ဟယးလို ဟယးလို
ှနးကြီ့၈၈ နည့းနည့းလေ့က်ယးက်ယျးေပာပါ လိုင့း သိပးမမိဘျူ့ဖစးနေတယး၈ခဏနေား ကျနြးတေား နေရာျေပာင့းလိုကးအုန့းမယး၈
ကးတာပှါနးကြီ့ခငးဗ်ှာ့နးကြီ့နဲအငးတာဗ်ူ့ခ်ငးလပါ၈ို
ကျနြးတေားဖုန့းက တရုတးဖုန့းမိုလို ဘကးထရီကုနးတောမယး၈
ဵု့ ကျနြးတေားမေ့ခ်ငးတာက ဟိုနေက အငးတာနကး
အတကြးစဥ့းကမ့းခ်ကးအသစးတေထြုတျးပနးတာနဲပါတးသကျးပျီ့ဖစးပါတယး၈ ထုတျးပနး ရတယး
ှနးကြီ့၈၈ဟုတးကဲ အခုအငးတာနကးသဵုို့ငးငဵတေား သမ္မတကြီ့ရဲ
ဲတြဲသူတေကြ စည့းကမ့းသိပးမရွိ ဘျူ့ဖစးနေတယး၈ ဒါနဲ
ရာသမာ့ကြီ့ လမ့းညနြးခ်ကးအရ ထုတျးပနးတာပါ၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး သဵခေ်ာင့းအသဵ၈၈ အငးတာနကး လိပးစာပေ့ရမယး
ိုငးတေမြွာသဵု့တဲသူ တေဟြာ မွတးပဵုတငးနဵပါတးနဲ
ိုတာကရော ဘာရညးရယြးခ်ကးနဲ ထုတးရပါသလဲခငးဗ်ာ့၈
အကြညးအညိုပ်ကးစေမယး အရာတေလြုပးကြပါတယး၈ျပီ့တောကျနြးတေားတို အစို့ရကိုလည့း ပုတးခတးနေကြပါတယး၈ ဒီလိုလူတြေ လုပးခ်ငးတိုင့းလုပးလို မရအောငး သဵု့စြဲသူတေရြဲ လိပးစာတို မွတးပဵုတငးနဵပါတးတယိူု ရပါမယး သကး နောကး
ို ပိုထိရောကးအောငး အငးတာနကးသဵု့စသြဲူတေရြဲ မွတးပဵုတငးအျပငး သန့းခေါငးစာရင့းမိတ္တူ
ငးမျေပရငး အိမးကမိန့းမ တိုယောက်ာ့တိုလို မိသာ့စှုငးတစးယောကးယောကးကို
အခုတောမွတးပဵုတငးနဵပါတးလောကးဘေဲတာင့းထာ့သေ့တာပါ၈
တိကိုပိတးပငးတာကရော ၈
ှနးကြီ့ ၈၈ ဒါကတောဗ်ာ ကျနြးတေားတိုအစို့ရက တိုငျး့ပညးအတကြး အာ့ကြို့မာနးတကး လုပးပေ့ နေခ်ိနးမွာ အကြညးအညိုပ်ကးစေတဲ ဓါတးပဵုတေတြငးကြတယးဗ်ာ ဒါတေတြငးလိုမရအောငးပိတးပငး လိုကးတာပါ၈ဟိုတစးလောကလည့း မိုကးခရိုဖုန့းတှိုကးကငးမရာတိကိုစကာ့ျေပာလိုမရအောငး ပိတျးပီ့ပျါပီ၈နောကး
နောကးဟိုကြညးဒီကြညး လုပးလိုမရအောငးလည့း မေားနီတာကိုပိတးပငးပါမယး၈
သဵခေ်ာင့းအသဵ၈၈လေ့စာ့လောကးပါတယး လေ့စာ့လောကးပါတယးခငးဗ်ာ့ အငးတာနကးကိုရော ပိတးဖရွိုပါသလှာ့နးကြီ့ခငးဗ်ာ့၈
ှနးကြီ့၈၈အငးတာနကးကိုတော ပိတးဖမရွိုပါဘူ့ အခုလိုဒီမိုကရေစီိုငးငဵမွာ လူတိုင့း အငးတာနကး သဵုို့ငးအောငး ကျနြးတေားတိုအစို့ရက စေတနာအျပညးနဲ လုပးပေ့ ထာ့ပါတယး
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ရငးဘောငးတနိးု့ငးအောငး
ကးထာ့သြာ့မွာပါ၈ အခုကီ့ဘုတးတို မေားနီတာတို သဵု့စြဲတငးသငြ့းခငြး
ပိတျးပီ့သြာ့ရငး အငးတာနကးspee ကိုလညျး့မငးတငးသြာ့မျွာဖစးပါတယး၈
ဟုတးကဲပှါနးကြီ့ခငးဗ်ာ့ နောကးတစးခုက
ျေပာသြာ့ပါတယး တယးလီဖုန့းသန့း ၀ှခ်မယး
တိုငးတေလြည့းနေရာအွဵစိုကးထျူပီ့ပျါပီ တပး
အခွုစွးစးစပိုင့းက
လိုသလောကးခ်ပေ့နေတာကို စဥ့းစာ့နေကြပါတယး ငါ့သိန့း
လူတေကြဖုန့းသိပးကိုငးခ်ငးပဵုမရပါဘူ့ ဒီလောကးစေ့်လေ့တောငှးယးကိုငးခ်ငးတာမဟုတးပါဘူ့ ဒီတောလိုအပးပါမလာ့လို၈ှယးမသဵု့ရငး
ဟယးလို ဟယးလှိုနးကြီ့ခငးဗ်ာ ဟယးလို ဟယးလို
ှနးကြီ့၈ သောတရွငးမ်ာ့ခငးဗ်ာ့ ဖုန့းလိုင့းက်သြာ့တာကြောငး ဒီမွာဘဲအစီအစဥးကို ရပးနာ့လိုကး ကြပါစိုဗ်ာ ၈
ို့ပေတို သငးတန့းက ညစးပါတးသညးလို
လိလညုး့
ျမိုသငးတန့းကျပနးလာတော ဇာတးမင့းသာ့ပဵုပေါကးလာသညး ၈ စကာ့ျေပာလ်ွငး
ဇာတးမင့းသာ့လိုလိျုေပာတတးလာသညး၈ သျူေပာတော ပညာရွိ တေဒြီလိျုေပာသညး ဒီကြာ့ထဲ
မြ့းခဵကြနြေက် ကိုယးတေားလည့း မလာတေိာု့ပေအာ့
ယြးသညးကို သူအမ်ို့တေမြနေရ တစးအုပးလဵု့
ြာ့လွညွး့ငးထရေားလာဂ်ီတေကြို အစို့ရကှိုယးခိုငျး့ပီ့ ကာ့သေ့သေ့လေ့
အပူကပးကြသညး၈ သိသောုး
ို့ပေ ကိုခြေ့ကိုရွဵု့သညး ၈ ရြာသာ့တြေ မဲမထညး၊ ရွဵု့ရသညးလို
ို့ပေကို နဘမ့းအုပးသညး ငါ့သိန့းကုနး၊ျဖစးသညး၈
လူတေကြိုမကြေနပး ထိနောကုး
ို့ပေ စကာ့သိပးမျေပာတော ၈ရြှာမ့းသာသညး၈
ို့ပေအမေ အောျးပီ့ရြာထျဲေပ့နေသညး ၈
သညးဟုသိရသညး ၈နောကးဘှ သမ္မတျဖစးအောငး ရြာဘေ့က ရေ့ခဲသညး၈ ရြာသာ့တြေ အမ်ို့တျြေမစးထမွဲာ
တေသြငြ့းပေ့မယးလိုျေပျာပနးသညး၈ ရြာသာ့တြေ ကာ့မောင့းသငးဖို လိုင့းကျာ့ပသနာရွာသညး ၈
ပုတးသငးညိုပါတီ ကျဖစးသညးဟုသိရသညး၈ သူမဲ လိုကးရသညး၈ ရြာရွိ
ဒီလိုနာ့မလညးသော အရာမ်ာ့ျေပာသျဖငး အိမး လဘကးရညး
ရှာတျီမစးထခဲုနးခ်တောမညးဟု
ျီေပ့ကြသညး၈ ဟိုရောကးတော ရငးခေါင့းလောကးရွိတဲ
သငးမပေ့ခဲ ၊ျဖစးသညး၈ အဵဖယြး
ို့ပေပါတကာ့ ရြာအကြောငျး့မစးအကြောငျး့မိုသငးတန့းက သူမျေပျာပခဲပါလာ့
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ၅၈မောငးလူအေ့နွငးံကငးမရာမ်ာ့ မောငးလူအေ့ လူတစးဦ့ခ်င့းစီတငြးသကး တငြး
ဖယြးမလိုလောကး အောငးနာ့လညးထာ့ပေလိမးံမညး၈ ထိုထမွဲအခ်ကးတစးခုဖောကးသညးခ်အံဵ၈ မောငးလူအေ့သညးကငးမရာဟူသောဓါတးပုဵရိုကးသညးံကိရိယာလေ့ကိုအသာ့လတြးအျမငးကတးနျေ ခင့းပငျးဖစးပေတောံသညး၈ မောငးလူအေ့သညးလကးရွိအလုပးအကိုငးကိုမလုပးသေ့ခငးကယဥးကေ့်မွုဟုနာမသမုဒးသညးံတက သိုလးမဟာတငြး ဓါတးရွငးရိုကးကျူ့ခင့း အတတးပညာ(
ခေ ဇာတးလမ့းဖနးတီ့မွုအတတးပညာရပျးဖစးသေားလည့း ကငးမရာ
ဘာသာရပးကို ပထမွစးတငြးမိုငးနာတြဲ အျဖစးမသငးခ်ငး လည့းက်ိတးမွိတးသငး ရလေသညး၈ နဂိုကတည့းကမွ ချနြးစကးပငျးေဖာငးံအောငးမကိုငးတတးခံေဲသာတောသာ့အဖို ဒစးဂ်စးတယး ဘာ
ိုလာ့ စကးပစည့းကလွေ့ငးံတေားတေားအခကးတေခြဲံသညး၈ ထိုဓါတးပုဵရိုကးစကး ကလေ့
စထငြးခါစက ရကြးဖ်ငးတဲံတစးလုဵ့စာ လောကးရွိကြောင့း
သိသောုးထုဵတုဵတုဵနတတလူအေ့တို စာမေ့ပတြဲိုင့းတငြး ကငးမရာဘာသာရပး ကို ဂရိတးတူ့အ
ကမတကိးုငးခဲံပါခေ်၈ ကငးမရာ က လူအေ့အပေ ထိုမ်ွလောကးကောင့းက်ို့မပေ့သော ယ္တရာ့ ငယးတစးချုဖစးပေသညး၈ သညးလွိုငးံ မောငးလူအေ့လည့း ကေ်ာင့းတေားမဟာကိုစနြးခြါရင့း သတင့းမီဒီယာကြီ့ တစးခုတငြး ကဵအာ့လေ်ားစြာ အလုပးရရွိလေရာ အွီကိရိယာကိုမပါတးသကးခ်ငးသောျးငာ့အောငးံကာနမ့းရျပနးသညး၈လကးထဲတငြးငေယြာ့ကလေ့ရွိ နေသောအခ်ိနးက နီ့ရာရွိူ့ရနြ့းသိျုေပ့ ကာကငးမရာတစးလုဵှ့ယးထာ့လိုကးလေသညး၈ အငးတာဗ်ူ့ လုပး၇
သိတငုး၊
ခရီ့ထကြးလ်ွငး ကိုယးံမ်ကးခကြးကို
တစးရကးမောငးလူအေ့တို တိုငျး့ပညးကြီ့တငြး လတးတေားရြေ့ကောကးပျြဲခိမျးံခိမးံသက်ဲင့းပလေရာ မောငးလူအေ့လည့း သတင့းလိုကး
(စတောံမယး တလြေဲတြ
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ဓါတးပုဵရိုကးခငြးံရွိသညးဟူသော သမာဓိကေားမရွငးလူကြီ့မင့းမ်ာ့ သေားလည့း
မ်ကွးာကလွေ့ငးံ
ဘယးသကိူုမွအျပစးတငးရနးသြေ့မရွိတောံသော
ိုအရ အျပငးက ရိုကးပါ
ရွိသော ကငးမရာကိုသာ စိတး
ဲသြ လိုအ
ဲခြဵရတာ
ကလေ့မ်ာ့ကိုစာသငးပျေ့ခငွး့ငးံ အလာ့တူ လူမွုရေ့ လုပးငန့းမ်ာ့ လုပးလေံရွိသညး၈( အမွနးက လူအေ့
ိုတံေဲကာငး ဟေ့လှာ့ါ့လာ့လုပးခ်ငးတာကပိုပါတယး ထိုအခါ အသီ့သီ့အသသ သော
လူငယးအဖမြ်ာဲ့ပရဟိတးအဖြဲမ်ာ့ ကို စုဵနေအောငးတေရြလေသညး၈ သာဓု ခေ ဖယြးကောင့းလေစြ၇၈ သိသောုး
မြ့း
နးထဲ တငြး ကြကးခေ့်တုန့းလေ့တစးခုကိုတေရြလေသညး၈ ဘယးသျူဖစးရမလဲ
မမေ့ပါနဲ မောငးလူအေ့အခ်စးတေား ကငးမရာမ်ာ့ပါပဲ၈ အနာကြီ့ရောဂါသညးတေကြို
ဵတြေ လျွူပီ့ ဓါတးပုဵတရြဲိုကးကြသညး၈
အိပးခ်းအိုငးဗြီကလေ့ငယးတေကြို ရုပးပိုင့း စိတးပိုင့းအကူအညီပေ့ကျြပီ့ နေရေ့စာ့ရေ့ကူညီပျေ့ပီ့မွ ကိုယး
မောငးလူအေ့တိလို ဗရုတးသုတးခတြေ ကငးမရာသရမ့းဖိုမဟုတးပါ၈
နာ့လညးပေ့ပါသညး၈ သိသောုးယခုကလိုအပးတာထကးပိုလျာပီ့ လူအေ့မ်ကးစိနောကးလာသျဖငးံျေပာရျခင့းပါ၈ နောကး သူမ်ာ့ အကူအညီလိုနေတာကို အေြ့ဓါတးအနည့းငယးပေ့ကျြပီ့ ရိုကျးပီ့
(လုပိးုငးသလောကးလုပးကြတာကိုသာဓုခေ ပေမယးံ
အျပစးမတငးတောံပါ၈ (တငးလိုလည့းမရပါ၈ ကိုယးံအဖြဲကိုယးတိုငးက ဂလိုလုပးနေတာကို့ ကငးမရာမ်ာ့ကိုသာ မအွေငွးံမွငးံကြိတးကာ ကြိတးကာ တစးရကး မ်ွာ့ငးံတြေ
မောငးလူအေ့တိုာနီမွုဵလိုသညးဟု
ေဲလတောံသညး၈
ိုသောအခါ မောငးလူအေ့တိုလူသိုကးလည့း ဖုတးဖတးခါထ သြာ့ကြ
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး မောငးလူအေ့အျပငးနယးပယးအသီ့သီ့မွလူငယးမ်ာ့လည့းအာ့သစးအငးသစးမ်ျာ့ဖငးံ မာတာမိခငးကို လာရောကးတြေ
ုဵကြလေသညး၈ ထိုစဥး (လာပျါပီဇာတးလိုကးကေ်ား
သညးံ သတင့းထောကး လေ့မ်ာ့
ိုသူမ်ာ့ရောကးလာကာ ပြဲတကးရောကးလာသူ ကြီ့တေားြာ့ကေ်ာင့းသာ့
တရမ့းရမွး့ငးံရိုကးပါတောံသညး၈ ဘယးသူကိုမွလည့းမ
ခ်ဲငးတောံပါ (အာ့လုဵ့နဲကသိနေတာကို့
ဒါနဲစိတးထဲမွတစးခနြ့းထျဲေပာလိုကးပါတောံသညး၈ မအေ-ို့ ကငးမရာတြေ၈ တစးရကးမောငးလူအေ့လည့း ဟိုယောငးယောငးဒီယောငးယောငျးဖငးံ လွေ်ာကးကြညံးနေရာ မောငးလူအွေ့ငးံ လကးထပးမညး သြာ့ တေလြေသညး၈ ငနဲမ တယးလွလာပါလာ့ဟု
ိုက သူကလေ့ ပုဵမ်ာ့ကိုကြညံးနေလေရာ
ခပးခေ်ာခေ်ာခ်ာတိတးလေ့တစးကောငွးငးံလညးခ်င့းယွကးကာရိုကးထာ့သော ဓါတးပုဵလေ့မ်ာ့ကို မျမငးခ်ငးစရာတေလြိုကးရလေတောံသညး၈ အရွငးဘုရာ့
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ၆၈မောငးလူအွေ့ငးံ ကေ်ာင့းသာ့ခေါင့းေ
ီ့လေရာ သခငးလူအေ့တစးယောကး ရာပေါင့းမ်ာ့စြာ သောသခငး
လူငယးမ်ွာ့ငးံအတျူမငျး့ခဵထောငးတငြး ရိပးသှာငးခဲံရ ရာမွ ယနေလတြျးေမာကးလျာခငျး့ဖစးသညး၈ သခငးလငြး၇
လူအေ့တိသခငုးပေါကးစမ်ာ့ အတူနေခဲံရသညး၈ ကေ်ာင့းသာ့သပိတးမ်ာ့အျပီ့တငြး မောငးလူအေ့ သညး
ကိုကေ်ာခိုင့းကာ သခငးဘှသိုျေခစုဵပစှးငးချဲံခငျး့ဖစးသညး၈ သခငးလူအေ့
မင့းပေါကးစို့ပေါကး အိုငးစီအကးစး အရေ့ပိုငျးမိုပိုငးဘှတေရြေစုဵျေမာခဲံလျေပီ၈ ထိုအခ်င့းအရာကို မောငးလူအှေ့မ့းမနည့းခဲံရို့အမွနးပါ၈ သခငးဘှကို ပိုမိုမကးစကးခံသဲညး၈ ဖ်ငးကြမ့းတိုကးပုဵှတျးပီ့ ရဲဘေားရဲဘကးမ်ျာ့ဖစးသညးံး၇သခငးညီလင့းမေား၇ သခငးကာကြီ့တို
ွငးံတဲကြာ
တိဗမာအစညုး့အရုဵ့ ညနးကြာ့ခ်ကးမ်ာ့အတိုင့းျေမအောကး တိုကးပြှဲငးရသညးံဘှကို
သညးံခဵစာ့ခ်ကးကာ့ ရွိနေသညး၈ ယင့းမွာ ရနးကုနးတကသိုလးမွထကြးခဲံရျခင့း သမဂကြီ့တငြးပှါငးခငြးံမရတျောံခင့းပငျးဖစးတောံသညး၈
ယူနီဗာစီတီ ကိုရောကးကတည့းက သမဂအဖြှဲငျးဖစးရသညးကိုမကးမကးစကးစကးဂုဏးယူမိသညး၈ ဥက
ခဲံသေားလည့း သမဂကိုလမြ့းနေမိတောံသညး၈ ရွိစေတောံလေ
ကိုယးမွကဵမပါဘဲ၈၈ သခငးဘျှဖငးံအရေ့တေားပုဵကို ဦ့ေ
မညးဟု အောကးမေံမိတောံသညး၈ သိသောုး
သိသောုးလောကဓဵသညး၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ဘယးလိျုေပာလိုကးတာလဲ သခငးလူအေ့ က်ုပးနာ့ကြာ့မွာ့တာတောံမဟုတးပါဘူ့နော သခငးကာကြီ့
ကြညးံလကိုးသညး၈ ဟုတးတယး သခငးကာကြီ့၈က်ုပးသခငး ခငးဗ်ာ့တိလိုတိုင့းက်ိျု့ပညးက်ို့တစးခု အျေခမလွမယးံ
မောရစးသွ်ျပညးတငြး
အခငြးံမပေ့ဘူ့ရဲဘေား ခငးဗ်ာ့လိုလူမ်ို့ကိုအရေ့တေားပုဵက ကိုယှးံမ့းနာကိုယးသိသမို ဥဂါ
ုဵ့ရွုဵ့လိုကးရတာ က်ုပျးဖငးံအသည့းနာတယး သခငးလူအေ့၈
ဒီကောငးခု အရေ့ပိုငးမငျး့ဖစးနေတယး ၈ေ
ိုတဲံ ဘိလပးရူ့နေတဲံဟာမလေ့နဲ အိမးထောငးက်နေသတဲံ၈ က်ုပးကိုမ်ာ့
ိုသလိုမ်ို့ ကြညးံသြာ့ လိုကးတာဗ်ာ၈ ၈ထြီ
ကဲ သခငးလူအေ့ က်ုပးသြျာ့ပီဗ်ို
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++ လတြးလပးရေ့ကာ့ရခေ်ျပီ၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး အလဵျဖွူငးံအတူ
တပးမတေားထဲတငြး၈ ရဲဘေားရဘဲကးခ်ငျး့ပနးတိုကးရျပီ၈ရငးနာဖယြးကောင့းလေစြ၈ သခငးလူအေ့ ကတောံ ရနးကုနးတငြး အလတြးပညာသငးကေ်ာင့းကလေ့ဖငြးံကာ မဒမးလူအွေ့ငးံ ရငးသြေ့မ်ာ့ ရကာ နေထိုငးနေသေားလည့း သခငးဟောင့းပီပီ ဗိုလးတစးထောငးသတင့းစာလေ့တစးကိုငးကိုငျးဖငးံ တိုင့းရျေ့ပညးရေ့မ်ာ့နာ့စငြးံရတောံသညး၈ တစးနေ ကေ်ာင့းသုအလိာလမ့းတငြျးမိုပိုငးဟောင့းဥဂွါငးံတေသြေ့သညး၈ ဖ
ပါမစးမ်ျာ့ဖငးံကြီ့ပြါ့နေပုဵမ်ာ့ကို တဵတြေ့ရေပတးမှငးအောငးကြှာ့ါသြာ့သညး၈ ဂ်ပနးကိုခဵခ်စဥးက မျေမိုတငြး
ဗိုလးမွူ့ဗထူ့ တပးရင့းတငြးတိုကးပြှဲငးရင့းက်
ကေ်ာျးမငုးိံငွးငးံ အလဵနီသခငးကောင့းတိုကျိုမငးမိသညး၈ ငယးသူငယးခ်ငျး့ဖစးသူ ရဲဘေားခငွးင့း ကတောံ ဂဠုနးဦ့စောတွိုငးံပေါင့းမိ၊ ကြို့စငးတကးသြာ့ ရရွာလျေပီ၈၈ တိုငျး့ပညးကု မုနးတိုင့း ကထနးထနး၈
ျပညးတငြ့းစစးမီ့ကြောငးံ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++ သခငးလူအေ့ပငး ဇရာရချဲံပီ၈ မနကးသတင့းစာဖတးရင့းျေမ့လျေ့ဖစးသော လင့းသကးနောငး လူအေ့က ကြာ့လာသောသတင့းကိုဖောကးသညးခ်နေသညး၈ သခငးလူအေ့ခေါင့း ကိုဒိန့းကနဲ မို့ကြို့ပစးသကဲံသို ခဵစာ့လိုကးရသညး၈ ဘာငါံျေမ့
သခငးရွုမောငးရယး တောကး ဟုတးတယး ဘို့ဘို့ရဲ ဒိုင့းနမိုကးနဲလာခြဲသြာ့တာ ဘို့ဘို့သူငယးခ်င့း ဗိုလးဇာဏီထနြ့းတိုပါသတဲံ ကြျီ့မတးလိုကးသောသမဂ၇ အရေ့တေားပုဵတိုင့းဦ့ေ
ာငးခဲံသော သမဂ၇ ခုတောံ အုတးပုဵျဖစးရပတဲံ၈
ဵျဖူ ဓါ့တုန့း သခငးလူအေ့ မွာ ကေ်ာင့းသာ့စိတးရွိတယး
ိုနေသူ သခငးလူအေ့ကိုျေမ့လေ့ လင့းသကးနောငး
က နာ့မလညိးုငးစြာမောံကြညးံလ်ကး၈ (ခ်စးခငးရသောသူငယးခ်င့းမ်ာ့ကိုက်ီစာ့လိုရင့း ခဵစာ့ခ်ကးမ်ာ့ကိုဇာတးလမ့း
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပှးှ၈မောငးလူအွေ့ငးံ Metaphor မ်ာ့ မောငးလူအေ့ မောငးလူအေ့သညးစာတိုပေစလေ့မ်ာ့ဖတးကာ တတးသျူဖစးသညး၈ို
ကိုအဘိဓါနး ဖငြးံ အ
ိုငးရာ ဦ့ွောကးမုနးတိုင့း
ငးပတြဲစးပြဲ တငြး တြေ
ုဵပညာ ယူခငြးံရခဲံ
ွငးံပါတးသကျးပီ့ အွီကှိကြီ့က ဂလိုဟောတေားမူ ၈
မောငးလူအေ့ ရေသြေ့ရျဲငိမ့းခ်မ့းသော
လိုအသုဵ့တေကြ ရဵဖနးရဵခါ ဒုကပေ့သကြဲ မွနးပါ အထူ့သျဖငးံ
ရငးထကဲအခဵ
တျခာ့အကြောင့းတေကြောငျးံဖစးစေကိုယးက ကတမ်ိျု့ဖစျးပီ့၈ျငိမ့းခ်မ့းသော
ရို့ရာအစြေဲကြာငျးံဖစးစေ
နာ့လညးသြာ့ သလိုရွိလာသညး၈ သညး၈ထိုပုဵျပငးမွာကာ့
တစးဦ့နဲ အမေရိကနးကောင့းဘြိုငးသတ္တှါတစးကောငးတိုပတးပင့း တို့ကြပါသညး၈ အငးဒီယန့းက ခပးတညးတညျးဖငးံ ကောင့းဘြိုငးကို လကးညို့တစးခေ်ာင့းထောငျးပသညး၈ခါ့မွပု
မ်ကးခကြျးဖငးံ
လကွးစးခေ်ာငျး့ပနးထောငျးပလိုကးရင့း လူနရီိုင့းက
လုပးလိုကးလေသညး၈ အဵံအာ့သငးံစရာ ထိုအခါကောင့းဘြိုငးက
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး လူနီကိုလမ့းဖယးဟူသော ဟနးအမူအရျာဖငးံလကးကိုရမျး့ပလိုကးလေသညး၈ လူနီကလမ့းဖယးပေ့ လိုကးသညး၈ ကောင့းဘြိုငးလည့းသူလမ့းသူလွေ်ာကးလာရင့း
ကြာ့လုဵ့ထုတလိးုကးသေ့သညး၈ ကောင့းဘြိုငး၈
၈အငးဒီယန့းတေသြတ္တိ ကောင့းတယးသျာေပာတာ ခုနတေခြဲံတဲံ ငတိကတောံ
၈လမ့းမွာဗ်ာ ငနီကောငးတစးကောငးနဲပတးပင့းတို့တာ ဒင့းက လကးညို့
ထောငျးပရင့းက်ုပးကိုသတးမယးလကြို မ့းလာ့မောင့းလာ့လုပးရဲ၈ဒါနဲက်ုပးကွစးချါပနးသတးမယးလို
အထကးပါစကာ့မ်ာ့က ကောင့းဘြိုငးဘကးကအျမငျးဖစးပါသညး၈ ကိုင့း စာဖတးသူ လူနီကြီ့ သူတျဲပနးရောကးတောံ ဇနီ့ကိုဘျာေပာသလဲ လူနီ၈
လူနီ၈ ၈ မိန့းမရာ
ထောငျးပလိုကးတောံ ငနဲက သူကိုသူ
ိတးတဲံဗ်ာ လကွးစးခေ်ာငျး့ပနးထောငျးပတယး၈
ငါလည့းကြောငးသြာ့တာပေါံ ဒါနဲ တောငး တောံလေ ဒီကောငးက
ိုတာရွိမွမရွိတာကြ ဟာ့ဟာ့ဟာ့ ပုဵျပငးလေ့ကျပီ့ပျါပီ မောငးလူအေ့ကတောံ
ိတးလာ့လို တောငးပုဵစဵ လကးအုပးခ်ျီပီ့ မေ့လိုကး ရေ
ိတးတံျေဲပာသြာ့
ကဵကောင့း လိမသေကြတာပါတကာ့၈ု
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ဒီလိုနာ့လညးမွုလဲပြုဵမ်ို့တေဘြာသျာပနးမွာ့တာတေကြောငးံစစးပြဲကြီ့တေဘြယးလောကးတောငျးဖစးချဲံပီ့ပလဲ၈ မောငးလူအေ့တိုငယးငယးကကြာ့ဖူ့သောဟာသတစးခုရွိပါသညး၈မရယးရသောဟာသပါ ပေ၈ တောနကးတော
စာသငးရငးတပညးံတစးယောကးကို မင့းတောံသေတောံမယး ဟု ဘယး
ဘယးလိုနာ့လညးသြာ့ မွန့းမသိသော တောငးပေ သာ့ကေ်ာင့းသာ့လေ့က သူဖအေကို အိမးက် တောံ ဂလျိုပနျးေပာသညး၈ အဖ အဖ ငါံကို ကေ်ာင့း
ဖခငးကလည့းသူဖာသာသူအဓိပါယးကောကးသညး၈ ဟေငါံသာ့ကိုသတးတောံမယးဟုတးလာ့မျဖစးဘူ့လကးဦ့မွုတောံယူရမယး
ဒူ့လေ့နဲသြာ့ပစးသတးလိုကးပါသတတး၈ မင့းတောံသေတောံမယး ရွိသညးံ
ကိုတျခာ့သူက တျခာ့အဓိပါယးကောကိးုငးသညးကိုသတိခ်ပးသငးံသညး၈
မောငးလူအေ့ကြုဵရဖူ့သညးံဥပမာအခ်ိုပေ့ကြညးံပေမညး၈ နငးငါံအိမးမွာမနေနဲနငးငါံသာ့မဟုတးဘူ့ (မောငးလူအေ့အမျေေပာခဲံသောစကာို့လိုခ်ကး( သာ့ရယးအမျေေပာတာနာ့ထောငးပါနေား) မင့းသောကးရူ့ပဲ သောကးသုဵ့မွမက်တာ နငးဟာလေ နငးလိုမွပဲငါံ စသျဖငးံ
ိုလခိုကး ကြိတထား့သာ့ကြီ့ မင့းလုပး ငို တးယး (
သူရငးထမွဲာရွိနေတဲံ
အျခာ့အခဵတေနြဲပေါငျး့ပီ့သကာလ အဓိပါယး မ်ို့စုဵကဲထြကြးသြာို့ငျးပီ့ မကောင့းတဲံ ဘကးကိုသြာ့ တြေ့မိရငး
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပှးှ၈မောငးလူအေ့တိုအလုပးရုဵ မောငးလူအေ့
ရျေေမသနငျး့ပညးံရွငးမင့းတိပေ်ာုးစဵရာတိုငျး့ပညးသှာယး
လ်ွငး တစးကြိမးက်အသုဵ့တေားခဵသော သဵတေား
ငးံစာစောငးတေားကြီ့ တစးစောငးတငြှးငးရောကး
လုပးကိုငးရင့း (အမွနးကှငးရွုပးနျေခငျး့ဖစးသညး အသကးမြှေ့မ့းကေ်ာငျး့ပုလေသညး၈
ားတောံမယးကိုယးံလူတို ဘုရာ့တရာ့ တ)
လေ့စာ့စရာတစးကကြးမွမရွိသေျာေပာငးခေ်ားခေ်ားမ်ကွးာပေ့ရွိသောျးငာ့လည့း သူမောငွး့ငးပေ့ လိုကးသောကြောငးံ
အကယးဒမီဓါတးရွငးမင့းသမီ့တစးဦွ့ငးံ နပန့းဖကးလုဵ့ခဲံသော မွာဏီထနြ့း ဟုနာမသမုဒးခဵထာ့ရသူ အထောကးတေားမမွာ ခ်ငျး့ပညးနယးကိုကိုယးစျာ့ပု၊ လတးတေားကို မ်ကးစောင့းထို့ ရနးကြို့စာ့ ခဲံသောျးငာ့ ညောငးညိုပငးဇာတးလမ့းကွိုစးကဒးခြဲ တိတိရိုကးခံသျဲူဖစးသညး၈
ပါရွာ့အ ယြှးငွးာခေါင့းချနြးချနြး ရုဵ့ရွိမိန့းကလေ့မ်ာ့ကို
ိုသူအထောကးတေားမွာျေပာလေံရွိရာ ကုသိုလး
အွီယောက်ာ့ ခ်စးဖယြးသောအခ်ကးမွာပိုကး
ဥပုဒးကြီ့တန့းလနျး့ဖငးံး တစးပငဲရဲတစးပိသျာဖစး ၈
ဵခေ့်ငွာ့ရနးအရွကးကင့းမဲံသေားလည့းသူထဵဖတြးက
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး အေားကြီ့ဟစးက်ယျးဖငးံတယးလီဖုန့းအငးတာဗ်ျူ့ပုလုပးလေံရွိသောအရပးထောငးထောငးမောင့းမော င့းအထောကးတေားကိုအောငးကြို့(သူတငြးအောငးဘု
ဇောှးင့းထတြးမက် ပပှင့းခငးမက်အသဵကြျီ့ဖငးံ စြာက်ယးက်ယးအမူအရျာပလေံရွိသော
ကိုသာလနြျးေပာင့းတိုက(း ၁င့းသညးသတင့းထောကးမလုပးခငးကမယကလူဟောင့းတစးယောကျးဖစး လေရာရည့းစာ့ထဵသရဏဂုဵေ သတင့းလာ
ှဿ၈မောငးလူအေ့တိုြာ့တင့းကုပး.. မောငးလူအေ့ မောငးလူအေ့သညှးေ့ကြာလွသော အသကးမြေ့ အေ
ငျးေခဖုဵ့ဒေသတစးခုတငြးနေထိုငးသျူဖစးသညးံအာ့လေ်ားစြာ
တစးဦ့ ၇ ပစြဲာ့ကြွီ့စးဦ့၇ အငးဂ်ငးနီယာတစးဦ့(အေ သို
တွိုငးံအတူ မောငးလူအေ့ခမ်ာ တစးယောကးစာလ်ွငး တစးတောငးသာသာဗ်ကးက်ယးသော သလနြး မ်ျာ့ဖငးံ အိပးစကးကြရကုနးသညး၈ မောငးလူအေ့တိုျေခာကးဦ့သညး တစးဦွ့ငးံတစးဦ့ ကာရိုကးတာခေ အမူအက်ငးံမ်ာ့မတူညီကြ သေားလည့း မတိုငးပငးထာ့ပါဘဲလ်ကး အာ့လုဵ့ ဇို့ကနဲ၇ ယမကာလုလငး၇ ဘီအီ့ကိုယးတေား၇ ဘီယာသခငးကြီ့၇ ထန့းရညးခရေဇီမ်ျာ့ဖစးနေကြတောံသညး၈ လူပ်ိုကြီ့မ်ာ့မွသညး၇ မောငးလူအေ့ လို ပိုစးံ လူပ်ို၇မ်ကွးာခ်ေမေားဒယးလိုပိုစးံလူပ်ိုပေါကး မ်ာ့ တေားမဂလာကြီ့ကို (အေ အ
ာငးတငြးမွီတင့းကြသူ မ်ာ့တငြးမောငးလူအေ့ထကးကြီ့ကြသူမ်ာ့(အသကိးုပါနာမ
မညးသပငျးိုဖစးစေ
ဥသဘဂေါဏမ်ာ့ နေထိုငးကြပါသောကြောငးံ အ
ကိုးဒးစုဵ
ာငးတေားမဂလာကိုြာ့တင့းကုပး ဟု
အောငျးေမနင့း အမညးပေ့ရျခင့းပါပေ၈ တနေသေားအေ
ြာ့မဒန့းမလေ့သညး မောငးလူအေ့ တိုြာ့ပုရိသမ်ာ့
ာငးအတငြ့းသို ကြကျးခဵထှဲငးလာသော မြျေ့မူရေ့သမာ့မ်ကွးာပျေ့ဖငးံ
ထီမထငးဟနးပေ့ကှာငးလာလေတောံသညး၈ အ ကလျေ့ဖစးရာ
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး အသညွး့လုဵ့အသကးဗူ့ကလေ့
ခ်စးသူဓါတးပုဵကိုမသိမသာကေ်ျာဖငးံကယြးကာ
ျဖငြးာံျ့ပုဵျ့ပုဵျ့ပလိုကးလေတောံသညး၈ မောငးလူအေ့ ဘေ့ခုတငး တငြးထိုငးနေသောြာ့မေားဒယး မ်ကွးာခေ်
ဘကးသငဲိုံစောင့းကြညးံရာ
မွနးဘောငး အသေ့စာ့လေ့ကို ခပးတညးတညျးဖငးံဖငးခုထိုငးထာ့လေသညး၈( လဒ
တောံလ်ငးတယး၈၈ မွနးကျြဲ ပီ့ဖငးရွပါစေ သိသောုးမညးမ်ွပငးခ်စးသူပိုငးြာ့မ်ျာ့ဖစးသညးကိုဖုဵ့ကယြးထာ့ပါစေ အွီတကသီလာ
ျေပာလိုကး သောစကာ့ကြောငးံ အသကဿးဝွစွးငးံ ဿဿ အရယြးမောငးလူအေ့တိုြွာ့စးကောငးခမ်ာ သာ့သတးရုဵပခဵို ရသကဲသို
ကိုရွုလောံစာရွုသူ ဦ့လေ့တို သမီ့တိုအိမးမွာအလွူလုပးတာ ငပိကြေားတေပြိုနေလိုအဘြာ့ကလာယူပါတဲံ (တောကး၈၈၈
ှယးဖလောကိးု ကိုယးံဗိုကးကိုယးမသထာသောမေားဒယြးာ့ ရူ့က မောငးလူအေ့လည့းစိတးအခ်ဥးပေါကးလာသျဖငးံ ငးထာ့တယးဗ်၈မတေားလိုကသြဲာ့ဦ့မယး
ဟာ မင့းမင့း ခငးဗ်ာ့ကောငးမလေ့ပုဵကိုဖငးခုထို
သာသာနာနွာကးလိုကးသောအခါ ယင့းြာ့ မ်ကွးာခ်ေက
(အလကာ့တမငးထိုငးထာ့တာ ကျနြးတေားမသိလထိုငးနေမိတာ ခငးဗ်ာ့ကောငးမလေ့ပုဵဘေ့နာ့မွာပဲ ဟု
မောငးလူအေ့ကေ်ာပေ့တမငးကယြးထာ့တောံ
ဓါတးပုဵလေ့ နဵဘေ့တငြး ခပးတညးတညးလာထောငးထာ့လိုကးလေတောံသညး၈ (သေဟ ထိုမ်ွလောကးစည့းလုဵ့ကြသောြာ့တင့းကုပးမငးဘှာငြးာ့ မ်ာ့ပါပေ၇၈ သိုသေားအြွီာ့ တင့းကုပး နေြာ့
(မူ့ကြဦ့စိနောုးအစးကိုတို
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပှး၀၈ဟုတးကဲံ ပေါ တယး ဗ် မောငးဥဂ္ဂါ
ရပါတယး၈ ပေါမ်ာ့ တယး ပေါကြယြးတယး သောကးပေါ
ျိုပီ့ကောင့းတာရွိသလို ပေါတောတော နဲ့ ငပေါ
ျိုပီ့ မကောင့းတဲံ အသုဵ့နှုန့း လည့းရွိပါတယး၈ ပေါတယး
လယြးနေတာကို မလယြးအောငး ခကးအောငး တမငး ကို လုပးကြရပါသတဲံဗ်ာ၈
လူမလေ့ပဲနေလိမးံမယးတဲံ သျူေပာတာလည့း ဟုတးတုတးတုတး ကျနြးတေားကေ်ာင့းမွာ
ကျနြးတေားတေတြာနျဲ့ငင့းတာရွာ့တယး ကျနြးတေားကို
ိုအလယြးရတယးပေါံ၈ နောကးကျနြးတေားအစာ့ကြာ့ထဲက မခဵနိုငးတဲံ သူငယးခ်င့းက
တနးဖို့ကြီ့တယးသတဲံ မင့းကဟိုဟာ စေ့်က်တာပေါံ၈
ိုလည့း လုပးပေ့လိုကး ကျနြးတေား
မကူညီရရငးမနေနိုငး အထာလည့းမကိုငးတတး စေ့်လည့းမတငးတတးတောံဒုကပေါံ၈
ကျနြးတေားပေ်ားသြာ့တယးဗ် နောကးသူငယးခ်င့းတစးယောကးက လာမေ့တယး ဟေံကောငးဥဂ္ဂါမင့းငပေါလာ့တဲံ
ကျနြးတေား ပေ်ားပေ်ားကြျီ့ပနျးေဖလိုကးတယး ဟုတးကဲံ ပေါတယးဗ်!!!!!!!
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပှး၁၈ဒါမ်ို့ ဘယးဘုရငး လုပးရဲ သလဲ မောငးဥဂ္ဂါ တစးခါတစးလေ ကျနြးတေားက ပေါကးကရအတေားတြေ့တဲံ ကောငးပါ တြေ့လိုကးရငးလည့း ဘယးသူမွလကးမခဵနိုငးတဲံ အတြေ့မ်ို့တြေ ကျနြးတေားတြေ့ဘူ့တဲံ အတြေ့တြေ ထဲက ပေါကးကရအတေတြေ့ကျိုပနျးေပျာပပါရစေဗ်ာ၈ ငယးငယးက ၅တန့းလောကးထငးတယး ယဥးကေ့်မှုသငးတန့းတစးခု ကျနြးတေားတကးနေတဲံ အခ်ိနးပေါံ၈ အဲဒီနေ့က
ရာမက ကျနြးတေားတို့ကို ဇာတးကြီ့
ရာမကို စိတးညစးအောငးလုပးခံဖဲူ့တယးဗ်၈
သှုဏ္ဏသာမဇာတးကိျုေပျာပျပီ့ အဲဒီထဲက ဘယးဇာတးကောငးကို အကြိုကး
သငးတန့းသာ့တေကြ အလောင့းတေား သှုဏ္ဏသာမကို ကြိုကးတယး ဘျာဖစးလို့လဲ မိဘကေ့်ဇူ့
ိုကြတယး၈ အဲဒီအခ်ိနးမွာ ကျနြးတေားက
သှုဏ္ဏသာမကျိုမာ့နဲ့ ပစးတဲံ ဘုရငးကြီ့ကို အကြိုကျးငိမးသကးသြာ့ တယး၈
ရာမက မ်ကးလုဵျ့ပူ့ မ်ကး
ုဵ့ပဲလို့ျေပာလိုကးတဲံ အခါတစးတန့းလုဵ့
နျးပူ့နဲ့ ကျနြးတေားကို ဘျာဖစးလို့လည့း
မေ့တယး၈ ကျနြးတေားကတောံ ခပးတညးတညးပဲ သှုဏ္ဏသာမဟာ အလောင့းတေား စဥးစာ့စရာမဘူ့ အျမငျးံမတး အ
ုဵ့ပဲလေ၈ ဇာတးလမ့းအရတောံ သှုဏ္ဏသာမဟာ တောတငြ့းသာ့
ငးံလောကးပဲ ရွိတယးလေ ဒါကို ဘုရငးက သမငးနဲမွျာ့ပီ့ပစးလိုကးတယး၈
ဵပိုငးစနစးလေ အကြောငျး့ပခ်ကးမရွိပဲ ကြိုကးသလို
ိုတာလဲ ဘုရငးပါ့စပးထမွဲာပဲရွိတာ ဘုရငျးပီ့ရငး
ျပီ့တဲံခေတးကို့၈ ဒီဘုရငးကြီ့ကတောံ မွာ့သတးမိတဲံ သှုဏ္ဏသာမကိုတောင့းပနးစကာ့ျေပာတဲံ အျပငး သှုဏ္ဏသာမရဲ့မိဘတေကြို သြေ့မတေားသာ့မစပး သှုဏ္ဏသာမအစာ့ စောငးံရွောကးပါမယးံလိုကတိတောငး ပေ့ခဲံသေ့တယးမွလာ့ ကဲ ဒီဘုရငးလို့ အျပုအမူမ်ို့ ဘယးဘုရငးလုပးရဲသလဲ လုိ့ျေပာလိုကးတောံ
ပတှးန့းက်ငးက လူတြေ အကုနးသိ ၈ ဘယးသူကိုမေ့မေ့ မောငးဥဂ္ဂါ နိုငးပါ ၈ မောငးဥဂ္ဂါသညး ကောင့းတဲံ အရာို့သမြ့းသော
ိုလို့ မောငးဥဂ္ဂါ မောငးဥဂ္ဂါကို
ို့သော အရာသာ မောငးဥဂ္ဂါ မွ
ီမွာ ရွိသညး၈ ထုသို့
စိတှးငးစာ့သော
မိန့းကလေ့သညး လည့း က်ပးမျပညျးံခင့းကြောငျးံဖစးလိမးံမယး၈ မောငးဥဂ္ဂါ ဘယးအခ်ိနးတေမြွာ မနကးစာ စာရငးလည့း အလုပးလုပးရင့းလည့း
ိုတောံ အိပးခ်ိနးကလြဲ က်နးတဲံ အခ်ိနးတေမြွာ
ို့ ၈ လမ့းလွေ်ာကးရငးလညိးု့
မောငးဥဂ္ဂါ ဘယးတုန့းက စ စ
ို့ ၇ အရကးသောကးရငးလည့း
အဲမွာ့လို့ မောငးဥဂ္ဂါက အိပးရငးတောငး
ို့ပါသညး၈ တစးနေ ဿ၁နာရီမွာ ရာခိုငးနှုန့း၈ျပညိးု့တာလဲ လေနာ
ို့လေ ၈ို့
ို့သော မောငးဥဂ္ဂျါဖစးပါသညး၈
ိုတောံ အှူဲလို့ စအေားတတျးပီ့ မြေ့ကထဲ က မောငးဥဂ္ဂါိုတဲံ
စကြဲပးနေသောကြောငးံ မောငးဥဂ္ဂါ မိဘမ်ာ့ မအိပးရအောငး မယးတယး အသဵျဖငးံ ခုနွစးအိမးကြာ့ ရွစးအိမးကြာ့ အေားတတးလေ ၈ ငယးငယးလေ့ထဲက
ို့သော မောငးဥဂ္ဂျါဖစးသညး၈
အရယြးလေ့နည့းနည့းရောကး လာတောံလည့း မောငးဥဂ္ဂါ က ရွိသော
ဲ ပငး မောငးဥဂ္ဂါ အိမးမွာ
အထငးတောံသြာ့မကြီ့လေနွငးံ ထိုစာအုပး တေထြဲက လူပုဵတြေ ခေါင့းေ
ကပးကြေ့နဲ ညပျးပီ့ အရုပးလုပး ကစာ့လေရဲ့ မောငးဥဂ္ဂါမိဘမ်ာ့ မ်ို့ အျမတးတနို့ ထာ့တဲံသော စာအုပးမ်ာ့ မေခြဵထိုကးစေ မောငးဥဂ္ဂျါဖစးလေသညး၈ ဤသို့ ဤပုဵ
ိုတဲံ အတိုင့း အမွနးအကနး မေခြဵထိုကးသော
ို့လွပါသော မောငးဥဂ္ဂျါဖစးပါသညး၈
နောကး မောငးဥဂ္ဂါ ကေ်ာင့းတကးတဲံ အခါမွာလည့း ကေ်ာင့းက တစးပတးကို စနေ တနဂေြ နွစးရကး ကေ်ာင့းပိတးတာ ကို မောငးဥဂ္ဂါ မက်ေနပး တစးပတးကို တစးရကး ပုဵမုနး ကေ်ာင့းျေပ့လေ
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ကေ်ာင့းျေပ့တဲံ အခါမွာလည့း တစးယောကးထဲမျေပ့ သူငယးခ်င့း အဖေားအပေါင့း ၂ယောကး ၃ယောကး လောကးနဲ့ျေပ့လေသညး၈ နောကး စည့းကမ့းကြီ့သော ကေ်ာင့းအုပး မောငးဥဂ္ဂါကို ရုဵ့ခန့းသို့
ရာကြီ့က မင့း ဘာလို ကေ်ာင့းျေပ့တာလဲ လို့
မေ့တဲံ အခါ မောငးဥဂ္ဂါက ကေ်ာင့းတကးတုန့း မို့ ကေ်ာင့းျေပ့တာပါ ကေ်ာင့းမတကးတောံရငး ကေ်ာင့းျေပ့လုိ့ မရတောံ ဘူ့ ဒါကြောငးံ ဒီအခငြးံ အရေ့ ကို အရယူတာပါဟု မောငးဥဂ္ဂျါပနျးေဖကြာ့တာ ကောင့းလနြ့းသောကြောငးံ ကြိမးလုဵ့
ုကို မောငးဥဂ္ဂါ ကို ခ်ျီ့မငးံတေားမှုပါတယး၈
လူပ်ိုပေါကးရောကးတောံ မောငးဥဂ္ဂါ တကသိုလးကေ်ာင့းသာ့ကြျီ့ဖစးတောံ လည့း
မောငးဥဂ္ဂါ ရဲ့ တကသိုလးက အညာမွာ လေ ၈ ကေ်ာင့းမွာ မောငးဥဂ္ဂါ ရည့းစာ့ရလေသညး သိတဲံ အတိုင့း
အာ့လုဵ့အသိပ၈ဲ ဘာပျဲေပျာေပာ မောငးဥဂ္ဂါ ရညးစာ့ရတာတောံ အမွနးပငး၇ ရတဲံ ရည့းစာ့ကလည့း နွစးပတးပငး မခဵခ်ငး မောငးဥဂ္ဂါနဲ့ ခသြဲာ့ လေတောံတယး၈ ခသြဲာ့ တဲံအကြောင့း က ဘောကြောငးံ အဲလေ ဘောလုဵ့ပြေဲကြာငးံ ကောငးမလေ့က အာကြီ့ အာ
ို ကြိုကးတယး မောငးဥဂ္ဂါ က
မနးယူမွမနးယူပဲ ဒီလို သမီ့ရည့းစာ့ ကြညးနူ့နေရမဲံ အခ်ိနးမွာ ဘောအသင့း ကြောင့းျေပာရင့း မောငးဥဂ္ဂါနွငးံ
ထိုကောငးမလေ့နွငးံ မောငးဥဂ္ဂါ မတေကြတောံပါ၈ ရနးကုနးရောကျးပီ့ လူမှုပညာရွငးကြီ့
ရာ ယောငးယောငး နဲ့ ခုနွစးရကး သာ့သမီ့ကို ကာယ ဒုက စိတ္တဒုက
နွစျးဖာသော ခ်မ့းသာတြေ ရအောငး နျေမဲ
ိျု့မဲ ပျေမဲ တျေမဲ ပငျးဖစးပါသညး၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပှး၃၈ျမငးသာ့ကြာ့သာ့ မောငးဥဂ္ဂါ ဖြဵျဖို့ရေ့လုပးသာ့တြေ ရြာထှဲငးရငး က်ငးကြဵရမညးံ စည့းကမ့းမ်ာ့စြာရွိပါတယး ရြာသာ့တေကြို မေ်ွားလငးံခ်ကး
ီသြာ့၇ လူထုနဲ့ နေ၇ လူထု
လူထုမွာရွိတဲံ အရာနဲပဲ တညးေ
ီက သငးယူ၇ လူထု
ီက ရွိတာနဲ ဈပီ့တောံ
ာကးပါ စသျဖငးံပေါံ ဒါတေဟြာ လူမှုဖဵျြ ဖို့ရေ့လုပးသာ့တိုင့း
နာ့လညးထာ့တဲံ က်ငှးံတးတေပြါ၈ ဒါပေမယးံ ဒီအတိုငးက်ငးံကြဵတဲံ သူရွာ့ပါတယး၈
ခေ ခဵရတဲံ ဖြဵျဖို့ရေ့ဘို့အေကြီ့အခ်ို့ တောငး ဒီလိုမလုပးကြပါဘူ့ ထာ့ပါတောံလေ၈ အရငးက ရြာတေသြာ့ရငး ရြာသာ့တြေ ကျြေ့တာ ကျနြးတေားတို့တြေ စာ့ခငြးံရွိပါတယး၈ နောကးပိုင့း ကေ့်ရြာကို အကူအညီလာပေ့တဲံ သူတေကြောငးံ ကေ့်ရြာမွှာနးထုတှးနးပို့တျြေဖစးလာလို့ ကေ့်ရြာက
ကျနြးတေားတို့ တြေ မစာ့တောံ ကေ့်ရြာက လူတေကြ ဒီလူတြေ သြေ့ကြီ့တယး ငါတို့ စေတနာနဲ ကျြေ့တာကို မစာ့ဘူ့လို့ ထငးကျြပနးရော မခကးဘူ့လာ့၈ နောကးမွ ရြာသာ့တြေ ကျြေ့တာကိုစာ့ ဒါပေမယးံ အ
ရြာလေ့တစးရြာ ကို တဲံ
တောငးကုန့းလေ့လုိ့ အဓိပာယးရတယး၈ တစးရြာ လုဵ့နွစျးခင့း ခရစးယာနး ဘာသှာငးတြေ ခ်ည့းပဲ၈ ဒီ့မောံ အဲဒီမွ
ျိုမို့တောငး အတေားခေါငးတာ အဲဒီက ရြာ သာ့ငှါ့ယးစာ့လို
ိုရငျးေပာမနေနဲ တောံ ငါ့ရကးမွ တစးစေ့်ရွိတာ
အခုခေတးကတောံ အရငးကလို သာ့ကောင့းမပေါတောံ သိပးအလုပးမျဖစးဘူ့ဗ်၈ အဲဒီရြာလေ့က ကေ့်ရြာလူကြီ့(အတငြ့းရေ့မှု့)ရဲ့ အိမးမွာ ကျနြးတေားတို့တည့းခိုခငြးံရပါတယး၈ ဒီဒေသက ကေ့်ရြာလူကြီ့ ရေ့ပုဵက အ
န့းဗ်၈ ရပးမိရပးဖ လူကြီ့တြေ ကို မဲနှိုကးခိုင့း ကဵ
သူမေဲပါကး ရငး ရယက အဖြှဲ့ငးလုပးရသဗ်၈ ကျနြးတေားတို့ အောကျးပညးအောကးရြာ မွာတောံ ရယက
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး တောတငြ့းအဖြဲ့ တေနြဲလည့း အ နေရတယး၈ ဒီလိုအ ထူ့
ငျးေပအောငးနေရ နိုငးငဵတေားးအစို့ရနဲ့လည့း အ
ငျးေပစေဖို့ ရြာလူကြီ့က အခရာပဲ၈ ဒါကြောငးံ ဘယးသူမွ မလုပးတာတဲံ
န့းပါံပှေါံပန့းပလုိ့ ရယး၈
တောငးကြီ့ပေါံဗ်ာ၈ တကယးလည့း လွသဗ်၈ ရြာလူကြီ့က သူတို့ရြာက မီ့မရကြောင့း ခေတးမမီကြောင့းျေပာလေရဲ့ ဒီရြာလေ့က မီ့မရ ခေတးမမွီဘူ့
ိုပေမဲံ ခေတးမွီတျဲံမို့ကြီ့တေမြွာ မရွိတဲံ ရို့သာ့မှု
ဖေားရေမှု နဲ့ သဘှာရဲ့ အလွအပ အငြေ့အသကးတြေ ရွိနေတယးလို့ျေပာလိုကးတောံမွ ရြာလူကြီ့ မ်ကးလုဵ့လေ့တြေ တောကးပသြာ့တာ ကြညးံမိသေ့သဗ်၈ နောကးကျနြးတေားတိုတြေ နာ့နေတဲံ အခ်ိနျးခဵထမွဲာ ကြကးအေားသဵကြာ့မိတယး၈ ရြာလူကြီ့ရဲ့ သာ့က သူအိမျးခဵထဲ က ကြကးကို လေ့ခနြဲ လိုကးထုနေတာတေသြဗ်၈ တေတြေခ်ြင့း ဒီကြကးဟာ ကျနြးတေားတို့ အတကြး သတးဖို့ လုပးနေတာ ကိုနာ့လညးလိုးကးတယး၈ သိသိခ်င့းအိမးအောကးကိုျေပ့
င့းတာ့တယး၈ဒါပေမယးံ နောကးက်သြာ့တယး၈ ကျနြးတေားက
ဒေါကြီ့မောကြီ့နဲ့ ကျနြးတေားတို အတကြး ဘာကြကးမွ သတးစရာမလိုဘူ့ ခငးဗ်ာ့တို့ စာ့တဲံ ဟာနဲ့ပဲ
လေသဵကျိုပနးလေ်ာံမိတယး၈ သူက တစးခနြ့းပျဲပနျးေပာတယး အဲဒီ စကာ့တစးခနြ့းက ကျနြးတောှးဲဘကးရငးအုဵမွာ ရာလေ့တို့
ရြာလူကြီ့ရဲ့ျေမ့လေ့ ၀ယောကး နဲ သူ့ချြေ့မက မ်ကးလုဵ့လေ့ အှိုင့းသာ့နဲ့ ကြညးနေလေရဲ့၈ အဲဒီည ကျနြးတေားတို့ ကို ကြကးသာ့ဟင့းနဲ့ ကျြေ့ပါတယး၈ ကျနြးတေားစာ့မှငးပါ သူတို့ ကလေ့ တြေ အတကြး မက်နးမွာ စို့လုိ့ ပါ၈
ပေါင့းသင့းအပးသော လူမိုကးမ်ာ့ နွငးံ မပေါင့းသင့းအပးသော လူလိမ္မာမ်ာ့ မောငးဥဂ္ဂါ
မပေါင့းနဲ့)၇ လူမိုကး ပ
ိုတဲံ ငချတြးက ဘာကြောငးံ ပေါင့းသင့းအပးသော
ျိုပီ့ အျပစးတငး မစောပါနဲ့ ဗ်ာ၈
အခုခေတးကြီ့က ပညာရွိ လူလိမ္မာ ပ
ိတာနဥ သှေနာ(ပညာရွိ လူလိမ္မာကိုပေါင့းပါ)
ဟောထာ့ လ်ကးနဲ့ မောငးဥဂ္ဂါ လုိ့ျေပာတာလဲ
ိုသူတြေ က ဗလာနဵျဖစးနျေပီ့ လူမိုကးတေကြ
ပေါင့းသင့းအပးသော လူမိုကးမ်ာ့ (ငါ့ကြေားမကြိုကးသော ကြောကးမိုကး မ်ာ့) လူတေကြ
အပေါင့းအသင့းတေပြါ၈ ကျနြးတေား ပေါင့းတဲံ လူမိုကးတြေ က ဗလာနဵမဟုတးတဲံ လူမိုကးတြေ ပါ၈ တိုငျး့ပညးအတကြး လိုအပးတဲံ လူမိုကးတေပြါ၈ ဒီအသုဵ့အနှုန့းလေ့ကို ရာမကြီ့ခငးေ NGO
ြဦ့ရဲ့ တို့တိုင့းာနီ မွာ တြေ့လို့ ကြိုကးလို့ ယူသုဵ့လိုးကးတာပါ၈
ိုတောံ လစာမ်ာ့မ်ာ့ ရမွာပေါံ
NGO မွာလုပးတောံ ဒေ လာစာ့ရမွာပေါံ ဂငြး ကောင့းလာ့ စတဲံ စတဲံ မေ့ခနြ့းမ်ာ့ကို ခေါင့းတငြးတငြး ခါရမ့းကာ ထောငး နခမ့းလမ့းလွေ်ာကး အို့ပစး အိမးပစး ကိုယးယုဵကြညးရာ ကိုယးလုပးနေကြသညး၈ ကျနြးတေားံ
အျေချပု ဖြဵျဖို့ရေ့သမာ့မ်ာ့ လူမိုကးမ်ာ့… စာမှုခကို
ကငးမရာ တစးလုဵ့လယြး မာတိကာ
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ရြာရို့ကို့ပေါကး ခေ်ာင့းပေါကးအောငးလေ်ာကး မင့းသမီ့ပါ့ရိုကး ခဵရ ဓာတးပုဵအရိုကးကောင့းလို့
သတင့းထောကး လူမိုကးမ်ာ့……… အရှုဵ့ပေ အရငျး့မုပး ဟိုဟာပေါငး ဒီဟာပေါငး ရောင့းမရမွန့းသိလ်ကး
ဘယးသူမွ မခိုင့းရပဲ ကိုယးသိသမွ်ှေမွ် အ
ိုခဵနေရလဲ ရျေ့မဲ ရေ့
ဲ ဘလောံဂါ လူမိုးကးမ်ာ့…………
ရွိစုမံစဲုနျဲ့ပခန့းလေ့လုပး တစးကာ့မွရောင့းမရ ကိုယးဘေားဒါတြေ လာကြညျးံပီ့ှေဖနး ခ်ီ့မမြ့းတာကို က်ေနပးနေသညး ပန့းခ်ီ
သူငယးခ်င့းတေစြု ဟိုနေရာလွူ ဒီနေရာ လွူ မာတိကာ
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ကလေ့တြေ ဖေ်ာျးေဖ လူကြီ့တျြေပုစု လဲသူကိုထူ အိမးက
ူလဲ မျငူမစူ လုပးနေတဲံ ပရဟိတ လူမိုကးမ်ာ့………………
မပေါင့းသင့းအပးသော လူလိမ္မာမ်ာ့ နာံ
ရာကို လာ မကြောနဲ့
တေတြာ့မယး မင့းသုိ့ စြေ ကျပငးညာ ဘီရောကး တီလို့လဲ နာသို့ခ ခြာ့ဖာ့မန့းကို ထရနးပဲရနး ဃကြး
ကျနြးပှါ့နေသော ပညာရွိ လူလိမ္မာကြီ့မ်ာ့………… ကျနြးတေားတို့ က လူမှုဖြဵျဖို့ကို ပရေားဖကးရွငး က်က် လုပးနေတာ ရပးရြာ ကို ၃ှ ကျနြးတေားတို့ ၁ှ ယူတာ တရာ့ပါတယး
လူလိမ္မာကြီ့မ်ာ့………… ဒိမိုကရေစီ အရောငးသန့းနျေပီ ရယးဒီိကယး အျမငးအရ ဟို ဘုတးအုပးကြီ့က ဟိုလိျုေပာထာ့တယး တြေ မစောကြပါနဲ့ စိတးခ် စိတးခ် တကယးတောံ ပေ့ခ်ငးနေတာ ကျြာပီ ( သောက) မာတိကာ
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး ရတောံမွာ(နောငးတ) တပြေ့တပိုကးကြီ့ ပေ့မွာ (ဒုက) ခ်ကးခ်င့းတောံ မျဖစးနိုငးသေ့ဘူ့( ၄ ဘှစောငး)ံ တေမြစောပါနဲ့
တရာ့ဟောသော ပညာရွိကြီ့မ်ာ့……ှက ဘိမာစေကြို စီကယးကောင့းတယှးစုိ့ က မိေ
နွစး အိမးတစး အိမး နေစာပှေါံလူစီက စစးပငးလေ့စြေ ဂကး(စး လေ့စြေ ရေနဵလေ့စြေ ကေ်ာကးတိမ့းလေ့စြေ ပဲစူတယှး
ခေတးပ်ကးဇောတိက ပေါကးဖေား လူလိမ္မာကြီ့မ်ာ့………… တတးတဲံ အစို့ရ နဲ့ တညးအောငးပေါင့း တတးနိုငးသမွ် တောင့းသော မိတ္တဗလကေ် ဘသုဵ့လုဵ့ လူနပးခ်မ့းသာ လူလိမ္မာမ်ာ့…………… ထိုသူမ်ာ့သညး
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပှး၅၈ှိရောဓိအတြေ့စဥးမ်ာ့ မောငးဥဂ္ဂျါပကကြး(ှ မနေ့က
-4တငြး အစီအစဥးတစးခု ကြညးံလိုကးရသညး ဗုဒဘာသာယဥးကေ့်မှုသငးတန့း
ဘုရာ့ဂုဏးတေား၇တရာ့ဂုဏးတေား၇သဵဃာဂုဏးတေားတြေ၇ ဖြာ့ဘကးတေား ၄ ပါ့ သစာ မဂ္ဂငး စတဲံ ဗုဒဘာသာ
-4က အငးတာဗ်ူ့တဲံ သူကို သူ့ကေ်ာင့းက
တလစကး ထောကးထောကးနဲ့ ရတြးသြာ့ နေသညး၈ ထိုသငးတန့းကို ကျနြးတေား မခ်ီ့က်ူ့မိပါ၈ျပကကြး (က ရြာလေ့တစးရြာ က
ယောကးလောကး နှဲို့င့းဖြဲ့ နေသညး၈ ထိုလူငယးကလေ့က စေတနှာနးထမ့းအျဖစး ဒီရြာလေ့မွာရြောသီ
စကှာို့င့းဖြဲ့ျေပာနေသညးဟုပငးထငးရသညး၈ သို့သေား သူစာသငး နေသညး၈ သူသငးတာက ကေ်ာကးသငးပုန့းမပါျေမျဖူမပါ ကြိမးလုဵ့မပါ၈ ကလေ့တေလြည့း စာအုပးမပါ ခဲတဵမပါ ဘောပငး မပါ၈ စာသငးနေတယးလို့ လုဵှ့မထငးရ တှါ့တဟာ့ဟာ့ စကာ့တြေျေပာနေကြသညး၈ လူငယးလေ့က ညီလေ့တို့ ဗုဒဘုရာ့ရွငးကို ဘယးအပငး အောကး မွာ ပငြံးတာလဲ သိလာ့ လုိ့ မေ့လိုကးတောံ ကလေ့ ၀ ယောကး လောကး က ဗောဓိပငးလိျု့ပနျးေဖလိုကး တယး ဒီတောံ လူငယးလေ့က အေ့ ဗောဓိပငး ကို တို့ ရြာထဲ အဖြဲ့ဖျြဲပီ့ လိုကးရွာရအောငး အရငးတေတြဲအဖကြဲို မုန့း
မင့းတုိ့ ဘုရာ့ရျဲ့ဖစးစဥးတေားးအကြောင့း သိခ်ငးလာ့လို့
သိပးတေားတာပဲလိျုေပာခ်လိုကးသညး၈ျပကကြး (ဿ ကျနြးတေားအဖြဲ့ တစးဖြဲ့ရဲ့ ကျနြးတေားတို့ တြေ ဖေ်ာျးေဖပေ့ဖို့
ြ့ြေ့ကြသညး၈
ြ့ြေ့ကြသညး
အစးကိုတို့ ကို ဟိုရောကးတာနဲ့ စိတးခ်မ့းသာစေရမယး ကလေ့တေကြ လာတဲံ သူတေမြုနးသမ်ွကို ခေါင့းလေ့ငုဵ
စိတးမခ်မ့းသာခဲံပါ၈ျပကကြး (ခ မ္တလေ့ရွိ
ကလေ့ပေါင့း ၄ှ ကေ်ားကေ်ာင့းတကး နေကြသညး၈ ကေ်ာင့းစရိတး ဘာကြေ့ညာကြေ့ လုဵှ့ မရွိ၈ မိဘမဲံ ကလေ့မ်ာ့ ရဲ့ နာ့ခိုရာ အေ့ရိပးသာ တိုင့းရင့းသာ့ လူမ်ို့မ်ာ့ အခမဲံ စာသငးကြာ့ရာ၈ ထိုကေ်ာင့းမွ ကလေ့မ်ာ့သညး လူကို ကြောကးသညးံ မရွိ ခေါင့းကို မငုဵ ခေါင့းကို မောံထာ့သညး မ်ကးလုဵ့မ်ာ့တငြး
ု့ဵျဖတးခ်ကးခိုငးမာသော မေ့ရို့အစုဵ အပေ ကာ့တကးသြာ့အောငး ကျနြးတေားံကျိုပုဵျ့ပလိုကးသညး၈ ကျနြးတောံးကို
ရာတေားကို ဦ့တငးရွိခို့လိုကးသညး၈ စိတးခ်မ့းသာလိုကးတာ၈ျပကကြး (၀ ပရဟိတ အဖြဲ့ တစးဖြဲ့က မိဘမဲံကေ်ာင့းတစးကေ်ာင့းကို အလွူတစးခုလုပးလေရဲ့ လုပးတဲံ သူက လူငယးလေ့ တြေ ကျနြးတေားတို့အရယြးတေပြေါံ၈ ခေါင့းေ နေပူထဲ
ကလေ့မ်ာ့တငြးမပါလွ အလွူရွငးအလိုက်ဘေုနးကြီ့
ာငးတို့ထငးရတဲံ သူက ကလေ့တေကြို
ာံရသညး ကစာ့ရသညး မကစာ့ရငး မေ
ာံရငး နေရိပးထမဲ်ာ့သြာနေမိရငး
ူလို့ရိုကးလိမးံမယး၈ ထိုအလွူသာဓုမခေ မိပါ၈
ျပကကြး (ဂ လူငယးအဖြဲ့ တစးခု အလျွူပုကြလေသညး၈ မျပုခငး အလျွူပုမဲံ နေရာကို ကြိုတငး လေံလာသညး ဘာတေလြိုအပးလည့းကြညးံသညး ဘာတြေ စိစဥးရမလဲ စဥ့းစာ့သညး၈ ဟိုရောကးရငး
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပး အစီအစဥးတိုင့း မလုပးခငး ကေ်ာင့းထိုငး
ရာတေားနဲ့ တှာနးခဵ ကို လုပးမဲံ အစီအစဥးတြေ
ျေပျာပသညး၈ သြာ့မဲံရပးရြာ ကေ်ာင့းကန့း နဲ့ မျေပာငျးေပာငး
ီလေ်ားတဲံ အှတးအစာ့တြေ တောကးတောကး
ကလေ့တြေ အလိုမတူပဲ ဘာမွမလုပးခိုင့း ကလေ့တြေ စိတး
ကို အျမဲ အကဲခကးသညး၈
ကလေ့တြေ ပေ်ားကြသညး၈ ထိုအလွူအာ့ သာဓု အာ့ရပါ့ရ ခေ မိလိုကးသညး သာဓု သာဓု သာဓု…ျပကကြး (၁ ရနးကုနးတိုင့းနွငးံ အျခာ့တိုင့းဒေသကြီ့တစးခုကြာ့ ဘ က ဘုန့းတေားကြီ့ ကေ်ာင့းတစးကေ်ာင့း တစးခုကို ကျနြးတေားတို့တြေ အဖြဲ့တစးခုနဲ့ ပူ့ပေါငျး့ပီ့ရောကးချဲံ ပနးတယး ကျနြးတေားတို့ရောကးတဲံ အခ်ိနးဟာ ၅နာရီ ကလေ့တေကြို အလဵတိုးငး ရွိရာကငြျး့ပငးက်ယးထဲ ညီညီညာညာ တန့း သစာအဓိာနးတြေ ရတြျးပီ့ နိုငးငဵတေား သီခ်င့း နှုတး
ိုးတယး နောကး ကျနြးတေားတို့ထဲမွ တစးယောကးက
ရာတေားကတေားလိုကးတာလို့ကျနြးတေားံ အဖြဲ့သာ့တြေျေပာ
ိုကြသညး၈ နောကှးှနာရီ
လောကးတငြးစီပြာ့ရေ့ကုမ္မဏီတစးခုက အလွူရွငးတေလြာကြသညး ကလေ့တြေ ရွေ့နည့းတူ အလဵတိုငးကငြ့းထဲ အလျေ့ပုရသညး နှုတး
သစာအဓိာနး သို့သေား
ကးစကာ့ကို နာ့ထောငးရသညး အခေါကးပေါင့းမ်ာ့စြာ အလတြးရသော
နာရီလောကးတငြး
အလဵတိုငးကငြ့းထဲ
ကျနြးတေား သကျးပင့း တစးခ်ကး ခ်လိုကးမိတယး၈ျပကကြး (ဃ သငးတန့းတစးချုပုလုပးနေသညး၈ သငးတန့း ဟနးက လတြးလပးသညး သငးတန့းသာ့ရြာသာ့ အာ့လုဵ့ စနစးတက် ညီညီညာညာ မဟုတးျေမကြီ့ပေ ထိုငးသူထိုငှးမ့းလ်ာ့မွောကးသူမွောကး ဒူ့ထောငးပေါငးကာ့ထိုငးသူထိုငး
လူငယးစိုကးပ်ို့ရေ့ပညာရွငးလေ့ကို လေ့စာ့ကြသညး ရိုသေကြသညး၈ အခုသူ့ သငးခန့းစာကို သေခ်ာ
အနီုမ်ကးနျွာဖူလာလုိ့ ဘာမွမျေပာင့းလဲသြာ့မ်ကးနျွာဖူမျမငးဖူ့သညး ရြာရွိ ကလေ့မ်ာ့နဲ့ ကာလ သမီ့တစးသကိုး
ကျနြးတောျးံပဵု့မိသညး ထိုအျပုဵ့ကာ့ ဂုဏးယူသညးံ အျပုဵ့၈
ျပကကြး (၂ သူသညျးမနးမာသညးလတြျးေမာကးရေ့ တရာ့မ်ွတရေ့ ဒီမိုကရေစီရေ့တို့အတကြးတိုကးပြှဲငးသူ တစးယောကျးဖစးသညး၈ သူဘှတစးခုလုဵ့ သူယုဵကြညးသော နိုငးငဵရေ့ခဵယူခ်ကျးဖငးံ နေသူလို့ သူကိုယးံသူ
ရဲ့ရငျးပီ့းအာက်ယးသော သူနှုတးကြောငးံ သူ တောရတြေ မွာ သတင့းသုဵ့ရလေံ ရွိသညး၈ တောရကျပနးလာရငး သူသညး ရဲရငးံသထကး ရဲရငးံလာသညး အသဵက်ယးသထကး က်ယးလာတတးသညး၈ သူတငြး မိသာ့စုရွိသညး၈ သာ့သမီ့ရွိသညး၈ဇနိ့မယာ့ရွိသညး၈ သူတောရအေိမးထောငးတှာနးကို အိမးထောငးတှာနး ဒီမိုကရေစီရမွ
ာကးတညးခ်ိနးတငြး
ျပနးထကြးလာရငး
သူဇနွီ့သာ့သမီ့ မ်ာ့ကို ရိုကးနွကး တတးသညး၈ သူကိုကျနြးတေား ဦ့မညတြးမိပါ၈ျပကကြး (ငျပ
ြ့ြေ့နေကြသညး၈
ထိုလူစုတငြး
ကေ့်ရြာသူကြီ့၇ရပးမိရပးဖမ်ာ့၇ ကာလသာ့ခေါင့းမ်ာ့၇ကာသသမီ့ခေါင့းမ်ာ့၇ရြာမူလတန့းကေ်ာင့းက ကေ်ာင့းအုပး
ာကးမလာ့ မူလတန့းကေ်ာင့း ကို တို့ခ်ဲ့ မလာ့
ရြာအတကြးလိုအပးသညး၈ ရေကာတာ အရငးေ မ
ြ့ေနြေတာက
ိုတဲံ ကိဈဖစးသညး၈ နွစးခုစလုဵ့ နောကး
ာကးမညး နောကးမွ တျေဖ့ျေဖ့ကေ်ာင့းကို ခ်ဲ့မယး အခုကေ်ာင့းသာတေနြဲ့
န့းရငး ဘုန့းကြီ့ကေ်ာင့းမွာ တန့းခြဲသငးမညး၈ ဒီ
သူသဘောလုပးတာမဟုတး၈ အာ့လုဵ့သဘျောဖစးသညး ၈ အာ့လုဵ့
အာ့လုဵ့ ဒီမိုကရေစီကို နာ့မလညး မသိကြ၈ ကျနြးတေား သူတို့ကို ဦ့ညတြး လိုကးမိသညး၈
ကရေားစာပေါင့းခ်ုပျးပကကြး (၃ သငးတန့းကေ်ာင့းတစးခုမွ သငးတန့းသာ့မ်ာ့ စှုေ့နေကြသညး၈ သူတို့ျေပာသညး စကာ့မ်ာ့တငြး ပေ လစီ အငးစတီက်ုရွင့း လစးဂ်စးတစီ အီကိုနောမစး စသညး ကျနြးတေား သိပးနာ့မလညးသော စကာ့မ်ာ့
တုကိးပြှဲငးရဲသညး၈
တိုငျး့ပညးအတကြး ဘြဲ့ပေါင့းမ်ာ့စြာ သငးတန့းပေါင့းမ်ာ့စြာကို သူတို့သညး ရဲရှဲဵှဵ စနြ့းစနြ့း စာ့စာ့ တီဂ်ျီဖငံးလည့းကောင့း
သြာ့ရောကးရေဲသာ
ရဲရေဲထာကးမ်ျာ့ဖစးကြသညး၈ ထိုသူတို့နဲ ဘာမွမျေပျာဖစးခဲံပါ၈ျပကကြး (ဈမနးမျာပညးအထကးပိုင့း စစးကိုင့းတိုင့း အထကျးမို့နယးတစးခုရဲ့ ရြာလေ့တစးရြာမွာ ရြာသာ့မ်ာ့ကို ကခ်င့းအဘို့ကြီ့တစးယောကး အထကြးတို့ စေတဲံ
ဒီသငးတန့းကို တောငးသူလယးကငြ့းကေ်ာင့းဟုခေ တယး၈ ကေ်ာင့း စာရေ့ခုဵမရွိ လယးကငြ့းကေ်ာင့း
ို တဲံ အတိုင့း လယးကငြ့းဟာ သူတို့ သငးတန့းပို့ခ်ရာ
လေံက်ငးကငြ့းကြျီ့ဖစးသညး၈ ကခ်ငးအဘို့ကြီ့သညး ခရစးယာနးဘာသှာငး ရြာသူရြာသာ့မ်ာ့ကာ့ ဗုဒဘာသာမ်ျာ့ဖစးကြသညး၈
ယြးတာမရွိ၈ ကျးပီ့
ကးဖငြးံပါမညး၈ ဒီသငးတန့းအတကြး စကောလာ့ရွစးမရွိ လစာပေ့စရာမလို ဒေသဖြဵျဖို့ဖို့
ဒေသတို့တတးဖို့သျာဖစးသညး၈ ကခ်င့းအဖို့ကြီ့နွငးံ သူ
စကာ့တြေ ဖောငးဖြဲ့ အောငးျေပျာဖစးလိုကးသညး၈
Ogga, ThuRa Myo